ရိုဟင်ဂျာ အက်သနစ် ဟုတ် မဟုတ် | ဧရာဝတီ
ရိုဟင်ဂျာ အက်သနစ် ဟုတ် မဟုတ်
စိုင်းလတ်| November 6, 2012 | Hits:9,375
36 | | စစ်တွေမြို့ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ခိုလှုံနေတဲ့ မွတ်စလင် ဒုက္ခသည်များ (ဓာတ်ပုံ- Reuters)
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ ပြသနာရဲ့အရင်းအမြစ်ဟာ အက်သနစ် (Ethnic) ကို တိုင်းရင်းသားလို့ ဘာသာပြန်ဆို (သို့မဟုတ်) နားလည်သဘောပေါက် တာက စတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အက်သနစ် ကို မြန်မာလို တိုင်းရင်းသား လို့ ဘာသာပြန်ဆိုလိုက်တာနဲ့ အော်တိုမစ်တစ် တွဲပါလာတာက မူရင်းဌာနေလူမျိုး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ဗါယ် ပါပဲ။ မူရင်းဌာနေလူမျိုးဆိုတာကတော့ Native (or) Indigenous ပါပဲ။ အမှန်က အက်သနစ် နဲ့ မူရင်း ဌာနေလူမျိုးဆိုတာကွာပါတယ်။ ဒီ ၂ ခုကို ၁ ခုတည်း အနေနဲ့တိုင်းရင်းသား ဆိုပြီး ပြန်ဆိုလိုက်တဲ့နေရာမှာ ရောထွေးပြီး ရိုဟင်ဂျာ အက် သနစ် ဟုတ်မဟုတ်ကနေ မြန်မာပြည်ရဲ့လူမျိုး ဟုတ်မဟုတ်၊ တိုင်းပြည်ရဲ့အရင်း ဟုတ်မဟုတ်၊ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ နာမည်ရှိမရှိ ဆိုတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။
(၁) အက်သနစ် ဆိုတာ လူစု (Cultural group) ပါပဲ။ လူတစုမှာ ဘာသာ၊ စကား၊ စသဖြင့် အုပ်စုတစ်ခု ရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခာတွေရှိမယ်၊ လူအစုအဝေး အနေနဲ့ ပြစရာရှိမယ်ဆိုရင် သူဟာ အက်သနစ် (သို့ ) ကာချရာဂရုပါပဲ။ အက်သနစ် သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာ တသက်လုံး တည်ငြိမ်မှုမ ရှိနိုင်ပါဘူး။ သူ့ သဘောသဘာဝအရ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စသဖြင့် လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး အက်သနစ်သွင်ပြင်တွေ ကို ပြောင်း လဲခြင်း၊ ပြင်ခြင်းခြင်း၊ အသစ်သွင်းခြင်း၊ ထုတ်ပြစ်ခြင်း စသဖြင့်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ကချင်လူမျိုးတွေ အကြောင်း လေ့လာတဲ့ Edmond Leach က ၁၉၅၀ လောက်ကတည်းက ဒီအချက်ကို ထောက်ပြထားပါတယ်။ ချင်းနဲ့ကယားလူမျိုးတွေအကြောင်းလေ့လာတဲ့ Dr. FK Lehman (aka) Chit Hlaing ကလည်း ၁၉၇၀ လောက်ကတည်းက ဒီလိုပဲဆိုပါတယ်။ အက်သနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာသူတိုင်း ဒီအချက်ကို နားလည်ပါတယ်။
ဥပမာ အက်သနစ် နာမည်ဖြစ်တဲ့ ရှမ်း (သို့ ) သျှမ်း ဆိုတာ အရင်က မရှိခဲ့ပါဘူး။ ရှမ်းတွေက အခုထက်ထိ သူတို့ ကိုယ်သူတို့တိုင်း (Tai) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်ကို မုံးတိုင်း လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကိုလိုနီ ခေတ်ပတ်ဝန်းကျင်တုန်းက ရှမ်းတွေနဲ့ လူမျိူချင်းနီးစပ်တဲ့ တိုင်းလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ စယမ် (Siam) – ယခု ထိုင်းနိုင်ငံ – ကို အခြေပြုပြီး စယမ် – စယမ် ဆိုရာကနေ တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာပြီး Shan/သျှမ်း ဆိုတာဖြစ်လာတာပါ။ ပတ်ကညောကနေ ကရင်၊ ကယားလီကနေ ကယားကနေ အခု ကရင်နီ (Karenni)၊ ဂျိမ်းဖော်အုပ်စုတစုက အစချီပြီး ကချင် စတဲ့ နာမည်တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဘာသာစကားဆိုရင်လည်း အရင်က ကရင်နီစာပေမရှိခဲ့ပေမဲ့ အခု ကရင်နီဘာသာစာပေအသစ်ကို ဒီနှစ်ဆန်းပိုင်းက ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ကရင်နီ ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ထယ်ဗူးဖဲ က တီထွင်ခဲ့တာပါ (May his soul rest in peace)။
(၂) အက်သနစ်ဆိုတာ မူရင်းဌာနေလူမျိုး နဲ့ ကွာပါတယ်။ ကနေဒါလိုနိုင်ငံမျိုးမှာ Red Indian (ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကအ တန်း ကျောင်းတွေမှာ သင်ရတဲ့ အက်စကီးမိုး) တွေဟာ နေ့ တစ်ဖ် တွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ဟာ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကတည်းက ကနေဒါမှာ နေနေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အင်ဒီးဂျီးနက်စ် (သို့ ) နေ့တစ်ဖ် လို့ ခေါ်တဲ့ မူရင်းဌာနေလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်မှ ၀င်ရောက်လာတဲ့ ဗီယက်နမ်တို့ ၊ မြန်မာတို့ ကို ကနေဒါမှာ အက်သနစ် တွေလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Ethnic Communities of Canada ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အိုင်းရစ်တွေ၊ တရုတ်တွေ၊ ဗီယက်နမ်တွေ၊ မြန်မာတွေလည်း ပါတာပါ။ ဥပမာအနေနဲ့ဒီကနေဒါအစိုးရ လင့်ခ်ကို ၀င်ကြည့်ပါ။ http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=89-621-X&CHROPG=1&lang=eng
ဒီလင့်ခ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ကိုးရီးယား၊ ဗီယက်နန် စတဲ့ လူစုတွေက မုရင်းဌာနေလူမျိုးတွေမဟုတ်၊ အက်သနစ်တွေဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားစည်း ကမ်းနဲ့ ညီရင် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိပြီး နိုင်ငံသားအခွင့် အရေး အပြည့်အ၀ရကြသလို နိုင်ငံအပေါ်ထားရှိရမဲ့ တာဝန်ဝတ္ထရားကို လည်း ကျေပွန်ရပါမယ်။
ဒါကြောင့် အက်သနစ် သို့ယဉ်ကျေးမှုအုပ်စု (Cultural group) လို့ ပြောတိုင်း အဲ့ဒီအုပ်စုတွေဟာ ကနေဒါမှာ နှစ်ပေါင်း ရာ ထောင်ချီကတည်းကရှိတဲ့ အင်တီးဂျီးနက်စ်တွေလို့ ယူဆစရာမလိုပါ။
– ရိုဟင်ဂျာတွေ နိုင်ငံသားနဲ့ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ပေးသင့်သလားဆိုရင် စည်းကမ်းနဲ့ ညီရင် ပေးသင့်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်အပေါ် သစ္စာလည်းရှိ၊ နိုင်ငံသားဝတ္ထရားလည်း ထမ်းဆောင်ဖို့ လိုပါတယ်။
– ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မူရင်းဌာနေလူမျိုးတွေဟုတ်သလားဆိုရင်တော့ ဒီအချက်က ဆွေးနွေးစရာပါ။ အခု ဆွေးနွေးမယ် ဆိုရင် ဆွေးနွေးရမှာက ရိုဟင်ဂျာ နာမည် ရှိမရှိမဟုတ်ပါ၊ ရိုဟင်ဂျာ အက်သနစ်ဟုတ်မဟုတ်ပါ။ မူရင်းဌာနေလူမျိုးဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူသည် ကနေဒါနိုင်ငံ Simon Fraser တက္ကသိုလ်တွင် ပါရဂူဘွဲ့ယူစာတမ်း ပြုစုနေသူ ဖြစ်သည်။
ဒီမိုး ဒီလေ ဒီလူတွေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ရှစ်လေးလုံး ဝိညာဉ်များက ဆက်လက် မခြောက်လှန့်စေချင်
84 Responses	LeaveaReply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Null November 6, 2012 - 12:33 pm	ပါရာဒိုင်းဆိုတာ ဘာလဲ။
ဒါပေမယ့် သိတာတစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ အားလုံးModernized Country ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ ဘယ်သူတွေက ခြေထောက်ကို ဆွဲနေတာလဲ။
ဘယ်သူတွေက ရှေ့ ကိုဆက်ပြီး မလျှောက်ချင်ကြတာလဲ။
IQသာကောင်းပြီး၊ ပညာတက်တွေသာ တစ်ပုံကြီးရှိပြီး၊ တကယ့်တိုင်းပြည်အခြေအနေကို နားလည်တာ ဘယ်နှစ်ယောက်များရှိကြသလဲ။
တစ်ချို့ က မတက်၊ မသိပေမယ့်၊ ပညာမာနလေးနဲ့ ရေးချင်တာ စွတ်ရေး၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပင်မရေစီးကြောင်းက ဘာမှန်းလဲ မသိ၊ သိဖို့ လဲ မလေ့လာ၊ လူမျိုးစွဲ၊ ဘာသာရေးစွဲ၊ ပုဂိုလ်စွဲသာမက နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်က ရန်စတွေကို အကြွေးဆပ်ဖို့ လောက်ပဲ ချောင်းနေကြတာ တွေ့တော့ အမြင်ကပ်ပါတယ်။
လိုချင်လှပြီရဲ့ ဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကို အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များက လမ်းခင်းပေးတာကိုလဲ နားမလည်၊ ရန်ကြွေးစပ်ဖို့ လောက်ပဲ စဉ်းစားနေကြတာ ပညာရှိ IQ သာရှိပြီး၊ ဦးနှောက်ချောင်နေကြတာလားလို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ အဲဒီလို တစ်ယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ လှေက ရှေ့ ကို မသွားဘူးဆိုရင်၊ နိုင်ငံခြားသားတွေ ပြောတဲ့ အရင်အစိုးရနဲ့ တန်တဲ့ မာနနဲ့ အတ္တတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ တိုင်းပြည်ပဲ ပြန်ဖြစ်လိုက်ပါလား..
တိုင်းရင်းသားတွေကလဲ ဘယ်ကပေါက်တက်ကရ ၈၀ တွေကို သွားပြီး ကိုယ်ချင်းစာနေကြတာလဲ မသိ။ ဒါဆိုလဲ ပြန်မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ သင်သာအစိုးရဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီပြဿနာတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။ သင်တို့ ရဲ့ ပြည်နယ်မှာခေါ်ထားလိုက်ပါလားလို့ .. ရိုးသားတာနဲ့ အတာကို ခွဲခြားနိုင်အောင် လုပ်နိုင်ကြပါစေ။
အရင်က ဒါမျိုး လူဆိုးဇတ်လမ်းကို အစိုးရက လုပ်နေတာ။ အခုသင်တို့ကော အဲဒီလို ပေးဆပ်နိုင်စွမ်းရှိကြလို့ လား။ တရားလား၊ မတရားလားဆိုတာ ဘာကို အခြေခံပြီး ဆုံးဖြတ်ကြမှာလဲ။
အရင်ဆုံးDictator ဆိုတဲ့ ဇတ်လမ်းကို အရင်ကြည့်လိုက်ပါအုံး။ အပြင်ဘက်လောကကြီးမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာ.. ဒါနဲ့ ထိုင်းအောက်ပိုင်းမှာ နယ်မြေလုတဲ့ ကိတ်စကော သင်သာဆိုရင် ဘယ်လိုopinionပေးမှာလဲ။ Objective မတူတဲ့ဟာတွေကို ဘယ်လိုသွားပြီး ဖျောင်းဖြမှာလဲ။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုအတွက်၊ ကျွနု်ပ်တို့ နယ်မြေပေးပါ့မယ်လို့ သွားပြောလိုက်ပါ့လား.. လောကကြီးမှာ ဘယ်တော့မှ လူတိုင်းကို မျက်နှာချိုသွေးလို့ ရတယ်ထင်နေလို့ လား။
အဲဒီလို တိုင်းရင်းသားတွေသာ ဘုရားနေရာရလို့ ကတော့ ရုပ်ရှင်တစ်ခုထဲကလို လူတွေဆီက လာသမျှ ဆုတောင်းတွေ အကုန် YES လို့ ဖြေပြီး ပြည်တွင်းစစ်ထဖြစ်မယ်။ နေရာတိုင်းမှာ YES MAN က ကောင်းတယ်ထင်ကြလို့ လား။ တက္ကသိုလ်မှာ ပါရဂူဘွဲ့ ပြုစုတယ်လို့ သာဆိုတယ်၊ ဘာ SUBJECT လဲ??
လူ့ လောကကြီးမှာ ပညာရေးအရ၊ logic အရ မှန်တယ်လို့ ထင်ရတဲ့ ကိတ်စတွေက တကယ့်လက်တွေ့ ဘ၀မှာ အဲဒီအမှားအမှန်နောက်ကွယ်က လူတွေရဲ့ ယုတ်မာညံ့ဖျင်းတဲ့ စိတ်တွေကျတော့ကော၊ သင်ရဲ့ ပါရဂူဘွဲ့ နဲ့ စာတမ်းထုတ်ပြီး၊ ဇယားဆွဲပြနိုင်လားလို့ မေးချင်ပါတယ်။ လက်ရှိက academicမဟုတ်ဘူး။ အကုန်လုံး Applied Science ခောတ်ရောက်နေပြီ။ လက်တွေ့ မကျတဲ့ကိတ်စတွေမှာ အချိန်မကုန်ပဲနဲ့ အရင် sociology တို့ ၊ psychology တို့ ၊ philosophy တို့ ၊ religious ဘာသာစုံ တို့ ကို လေ့လာပြီးမှ စကားလာပြောစေချင်ပါတယ်။
Reply	=== November 7, 2012 - 7:09 am	“ဒါနဲ့ ထိုင်းအောက်ပိုင်းမှာ နယ်မြေလုတဲ့ ကိတ်စကော သင်သာဆိုရင် ဘယ်လိုopinionပေးမှာလဲ။”
— ဗုဒ္ဓေါ ထိုင်းတောင်ပိုင်းဆိုတာ မလေးမွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဒေသလေ၊ စူလတန်တွေ အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီခဲ့တယ်။ ၁၉၀၅ ခုနှစ်လောက်မှ ထိုင်းနိုင်ငံက ဝင်သိမ်းလိုက်တာ၊ ခက်ပါပကော။
“လက်ရှိက academicမဟုတ်ဘူး။ အကုန်လုံး Applied Science ခောတ်ရောက်နေပြီ။ လက်တွေ့ မကျတဲ့ကိတ်စတွေမှာ အချိန်မကုန်ပဲနဲ့ အရင် sociology တို့ ၊ psychology တို့ ၊ philosophy တို့ ၊ religious ဘာသာစုံ တို့ ကို လေ့လာပြီးမှ စကားလာပြောစေချင်ပါတယ်။”
— ပြဿနာပဲ sociology, psychology,၊ philosophy, religious တစ်ခုမှ Applied Science မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကိုယ်ရေးတဲ့စာ အမြီးအမောက်လေးလည်း တည့်အောင်ပြန်ကြည့်ပါဦး ကိုရင်။
Reply	mhoesan November 25, 2012 - 9:15 am	ဟုတ်တယ်ဗျို့
Reply	pn wara November 6, 2012 - 2:47 pm	လာပြန်ပြီ -ဒုတိယ ဒေါက်တာ ဇာနီ- လို့ ဘဲ ပြောလိုက်ချင်တော့တယ်။
Reply	Kyaw Htin November 6, 2012 - 2:51 pm	အင်း။နိင်ငံ၇ဲ.နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း”ဂဂဏဏ”မသိလည်းဘာအေ၇းလည်း။ ငါလည်းနောက်ကိုဘယ်နိင်ငံမှာ ”ဘာညာ“ ပါ၇ဂူ“ဘွဲ.သင်ယူနေပါတယ်ဆိုတာကြွားပြီးစာေ၇းအုန်းမှဘဲ။
Reply	ko ko taw November 8, 2012 - 5:51 am	6 months certificate for Par ya Gu?Hehe.
Reply	ရာဇာ November 6, 2012 - 3:35 pm	တခြားဘာမှ တွေးမနေ..ရေးမနေကြပါနဲ့….တာဝန်ရှိသူတွေ အခုလုပ်နေတာက အက်သနစ် လဲ မဟုတ်သလို နေ့တစ်ဗ် လဲ မဟုတ်ဘူး….ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဘာလူမျိူးဘဲ ဖြစ်ဖြစ် တရားမဝင် လာရောက်နေထိုင်သူတွေကို စစ်ဆေးပြီး ၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေ နဲ့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမယ် လို့ အတိအလင်း ကြေငြာထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်…ဒီတော့ ရိုဟင်ဂျာ ဘဲဖြစ်ဖြစ်…ဘင်္ဂလာလီ ဘဲဖြစ်ဖြစ် တရားဝင် စာရွက်စာတမ်း မရှိသူတွေ အားလုံးကို စစ်ဆေးသွားမှာပါ….နိူင်ငံခြားသားတယောက်က ဗုဒ္မဘာသာဝင် ဖြစ်နေပါစေ တရားဝင် စာရွက်စာတမ်း မရှိခဲ့လျှင်တော့ ဥပဒေ အတိုင်း ဆောင်ရွက်အရေးယူ ခံရမှာပါ…ဒီတော့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး တွေကို အခုကိစ္စ နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ထင်ရာမြင် ဆွဲမရေးကြပါနဲ့…သို့သော် လက်ရှိဖြစ်နေသော အရပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချူပ်အချာ အာဏာပိုင်အတွင်း၌ ဖြစ်ပြီး မိမိတို့၏ တိုင်းရင်းသားဖြစ်သော ရခိုင်လူမျိုးတို့ အတွက် ထိပါးလာနိုင်သော အန္တရယ် များရှိခဲ့လျှင်တော့ အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမှာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်း၏ မွေးရာပါ တာဝန်ဆိုတာကို အားလုံးနားလည် မှတ်ယူထားရပါမယ်………
Reply	swe htwe November 6, 2012 - 4:05 pm	that’s right
Reply	no name November 10, 2012 - 6:04 pm	i wanna say like this. you right.
Reply	mg mg u November 6, 2012 - 5:54 pm	Rightly said!!
Reply	nyo tun naung November 17, 2012 - 6:07 am	အဲဒီလို လိုရင်းတိုရှင်းလေး ကို comment အနေ နဲ့မရေးဘဲ ဆောင်းပါးလေးရေးပါလားဗျာ.. ကျွှန်တော် ခင်ဗျားနဲ့အများကြီးသဘောတူပါတယ်..
Reply	ကိုရန် November 6, 2012 - 4:08 pm	ကျွန်တော့်အမြင်တော့ ရိုဟင်ဂျာကို ထိလို့ မူဆလင် (ပြည်တွင်းနေ ပြည်ပနေ)်တွေက ၀ိုင်းအာနေကြတာပါ။ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအပါအ၀င် ကျန်တိုင်းရင်းသားအားလုံး ကရိုဟင်ဂျာ ရဲ့ကျူးကျော်မုကို ၀ိုင်းကန့်ကွက်နေချိန်မုာ ရိုဟင်ဂျာ သည်မူဆလင်၊ မူဆလင်သည် ရိုဟင်ဂျာ ဆိုပြီး၊ ကြွေးကြော်ပြီး ပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာနုိူင်ငံသားကတ်ရ မူဆလင်တွေက ကတ်ကတ်လန်ဖြစ်နေတာ တွေရပါတယ်။ လာဘ်ပေးပြီး နိူင်ငံသားကတ်ရနေတဲ့ ကုလားတွေအများကြီး ရန်ကုန်မှာတင်မက နေရာတုိုင်းမှာရှိနေကြောင်း။ ဒီရခိုင်ပြသနာမဖြစ်ခင် ကတည်းကရှိခဲ့ကြောင်း ရှိဆဲ ရှိလတံ။ သူတို့ကိုကော အခုအစိုးရကဘယ်လို အရေးယူမယ်ဆိုတာကြည့်ချင် ပါသေးရဲ့။ လာဘ်စားထားတာတွေ မပေါ်အောင် ဖုံးဖိပြီးလုပ်ကြ လိမ့်မယ်လို့တော့ ယူဆပါတယ်။
Reply	တိုင်းရင်းသား November 6, 2012 - 5:16 pm	ရခိုင် သမိုင်းပညာရှင်တွေရော ဗမာသမိုင်းပညာရှင်တွေကပါ တခြားကိစ္စမှာ သဘောကွဲလွဲကောင်း ကွဲလွဲနိုင်ပေမယ့် ရိုဟင်ဂျာဟာ ငါတို့ တိုင်းရင်းသား လုံးဝ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အချက်မှာတော့ အားလုံး သဘောတူပြီးသား ဆိုတာကိုပဲ ပြောချင်တယ်။
Reply	မွန်mon November 25, 2012 - 9:19 am	ထောက်ခံပါတယ်
Reply	yanyan htet November 6, 2012 - 5:49 pm	yes, i agree with u but not all ,because first main i want to telll is ethinc,if any one understant that word will be clear why i will tell u myanmar is buddish country so u will think they r muslin that why u tell me no no i don’t mean that u have to understant first for myanmar pelple where r come from where r they if u understant u will knew , that why shan or kreen or what ever they change the name we r in same group ethnic in myanmar country even shan is muslin , still fine because we r smae in ethnic, ok what i want to tell u is u be clear i ‘m not issue about musslin or buddish, because of u will see i’m buddish yesss yess but i will never accept even india or chinese or thai buddish r tell to world we r same ethnic, i will laughing and will be defence, thatasimple understant. i’m not good writer english but pls understand i will never never accept any any buddish not for myanmar country if they say same ethnic…yes u can tell how is god, same we r from myanmar we pray and follow god , but we r different ethnic with god, understant…so that part call rogina or yaroinga what ever i can’t accept , and also we know muslin wanna try to do for wold to muslin world ,no way get out for myanmarthat not funny that not joke… don’t be issue about these thing forget it , if u r buddish or … what ever most important is born in myanmar or outside where ever i will look ur parents if not sorry mate……………
Reply	mg mg u November 6, 2012 - 5:50 pm	Most are correct!!But I just wanna point out one thing if they (so called Rohigyas) really feel ethics of Myanmar, then they should too have feeling of love, patriotism for our country (Myanmar), but they show just opposite during Olympic and in many other cases which spoil the name our country, that I and many of our country-men would never do it, I guess.
Reply	yanyan htet November 6, 2012 - 6:18 pm	whatabig issue is even they r buddish we can’t accept because simple i explainu already chinse or india or thai what ever we can’t accept simple ,isn’t ans: is we r not same ethinc..so i can’t not give up to them never never..what the stupid issue writer simon man, come on!!!!plss try to understant us i already explain to u up more about that don’t try to make confuse to our pelople change the name shan , blarrr blarr kerren .. we know we r same so what ever we like we can change, not only shan look now days burma to myanmar yes we can thatadepents on our mind, . that not joke , next time don’t try to confuse to our pelople mate………
Reply	emerald.www November 6, 2012 - 6:18 pm	ကောင်းပါတယ်။တွေးထားတာလေးက။
ဒါပေမယ့်ပြသနာက ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့လူမျိုးတွေဆိုတာ တိုင်းရင်းသားပါလို့ သူတို့ ကိုသူတို့ ထုတ်ဖော်ပြောနေတာကို
ဘယ်လိုခင်ဗျားယူဆလဲ။တစ်ချို့ ကလဲသံယောင်လိုက်ကြတယ်။တိုင်းရင်းသားပေါ့။နိုင်ငံတကာမီဒီယာ၊နိုင်ငံအဖွဲ့ အစည်း
အမျိုးမျိုးပေါ့။ဟုတ်ပြီ တိုင်းရင်းသားလို့ ဘာကြောင့်အပြောမခံနိုင်တာလဲ။နိုင်ငံကိုခွဲထုတ်ဖို့ ကြံစည်ခဲ့တယ်၊ကြံစည်ဆဲ။
နောက်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဘယ်လိုခံစားပြီးမှဒီလိုပျံ့ နှံ့ လာသလဲ။သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ဗျာ။ကျွန်တော့ရခိုင်တော့မဟုတ်
နောက်တစ်ခု က ။ရိုဟင်ဂျာဆိုတာခေါ်ခွင့်ရှိတယ်။ရှမ်းတောင်ရှမ်းက တိုင်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခေါ်သေးတာဘဲ
ဟုတ်ပြီ။ခေါ်လို့ ရတယ်။ရှမ်းကိုအစိုးရကသတ်မှတ်လို့ ရှမ်းလို့ ခေါ်တယ်။ရှမ်းကတော့သူတို့ ကိုသူတို့ ရှမ်းလို့ ခေါ်တယ်။
အခေါ်ခံရသူကော၊ကင်ပွန်းတပ်တဲ့သူလဲလက်ခံတယ်။သူတို့ မှာလဲသမိုင်းကြောင်းဆက်စပ်မှုရှိတယ်။အခုရှမ်းလို့ သိကြခေါ်
ကြပေမယ်သူ့ ရဲ့အော်ရီဂျင်က တိုင်လူမျိုးဘဲ။
ရိုဟင်ဂျာ……ခေါ်လို့ ရတယ်၊နာမည်ပြောင်းလို့ ရတယ်။ဘင်္ဂဂါလီလူမျိုးကနေ။ဒါပေမယ့်သူ့ ရဲ့မျိုးရိုးကတော့
ဘင်္ဂလီပေါ့။အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ဘင်္ဂလီမဟုတ်ဘူးသူတို့ ဟာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးပါဆို သူတို့ ရဲ့အော်ရီဂျင်ကဘာလဲဆိုတာရှိ
ပြောတယ်။လူတစ်ချို့ မြန်မာ့မြေပေါ်ရောက်နေတယ်။ရှိသမျှပြသနာရှာနေတဲ့၊ဗုံးခွဲဖို့ ကြံနေတဲ့သူတိုင်းကို၊ကမ္ဘယမနှံ့ 
ရောက်နေတဲ့ဘင်္ဂလီတိုင်းကိုရိုဟင်ဂျာတွေကမ္ဘာအနှံ့ ပျံ့ နေတယ်လို့ ပြောပြီးအားလုံးကိုထိုးကြွေးနေတယ်။တစ်ကယ်လို့ 
ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုလက်ခံလိုက်ရင် သူတို့ ရဲ့အော်ရီဂျင်ပျောက်သွားမှာဖြစ်လို့ ။အဲဒီလိုပျောက်ခြင်းကဘယ်
လောက်အန္တရာယ်ကြီးလဲဆိုတာသိစေချင်တယ်။သူတို့ ကိုလက်ခံလိုက်လို့ လဲ(အားလုံးကိုလက်မခံနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်၊နိုင်ငံသားဖြစ်
မိန်းမဆန်ဆန် ကုလိမ်ကကျစ်နဲ့ အစွန်းရောက်သလေးဘာလေးနဲ့ ။ဘယ်သူသီးခံမလဲ။လူ့ အခွင့်အရေးဆိုတာကိုယ်တိုင်
မခံစားဘူးလို့ ဒါမျိုးပြောတာဖြစ်မှာ။လူ့ အခွင့်အရေးဆိုတာဘယ်သူ့ ဘယ်သူရဲ့အခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးတာမှလူ့ အခွင့်အရေးဗျ။
စကားအသုံးအနှုံးကအရေးမကြီးဘူးမထင်ပါနဲ့။ရှမ်းကိုတိုင်လို့ ခေါ်ခေါ်၊ထပ်ပြောင်းဦး။ရသေးတယ်။ဘင်္ဂလီ ကိုရိုဟင်ဂျာပါဆိုလို့ 
ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အမည်ရှိမရှိ ။ရှိလို့ ရ၊ခေါ်လို့ ရ၊ပြောင်းလို့ ရပါတယ်။ဒါပေမယ့်သူတို့ ရဲ့အော်ရီဂျင်ဖျောက်ဖျက်လို့ 
အရင်ဘာလဲဆိုရင်ဆက်စပ်လို့ ရတယ်။တိုင်လူမျိုးပါ။ဆိုင်းယမ်းလို့ လဲပြောလို့ ရပါတယ်။)
လောကကြီးမှာဘာမှပြီးပြည့်စုံတာမရှိဘူး။အဲဒီအထဲလူအခွင့်အရေးလဲပါတာပေါ့ဗျာ။လူ့ အခွင့်အရေးအတွက်လူ့ 
အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးရတယ်ဆိုရင် လူ့ အခွင့်အရေးလို့ ခေါ်ထိုက်ပါသေးလား။
Reply	Ko Yan November 9, 2012 - 9:42 am	ကျေးဇူးပါ ကိုရန်။ ကျွန်တော်လဲ အခုမှ သေချာ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့နာမည်ကို ဒီကောင်တွေ အသဲအမဲတောင်းနေ လဲဆိုတာ သဘောပေါက်သွားတယ်။ လေးစားပါတယ်။ ရှယ်လိုက်ပရစေ။
Reply	Joe Nay Joe November 13, 2012 - 9:27 pm	Rohingya isn’tarecent creation! Rohingya are there in Arakan before British invasion. You can readabook written by Francis Buchanan in 1799.
“The Mahommedans settled at Arakan ,call the country Rovingaw ”
“I shall now add three dialects, spoken in the Burma Empire, but evidently derived from thelanguage of the Hindu nation. The first is that spoken by the Mohammedans , who have long settled in Arakan , and who call themselves Rooinga , or natives of Arakan “
Reply	winko November 6, 2012 - 7:39 pm	ဒီဆောင်းပါး လား စာတမ်းလားရေးတဲ့ လူက ဘင်္ဂါလီမူဆလင်ဘက်ကပါနေတာကို တွေ့ရပါတယ် မနေ့တစ်နေ့က နိုင်ငံခြားကလာတဲ့လူကိုလည်း Ethnic ပေးရမှာလား မင်းဒါဆို မင်းကိုယ်တိုင် အင်္ဂလန်မှာသွားတောင်းကြည့်ပါလား ethnic…? ရမလား။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောနေတယ်။ မြန်မာဘက်ကဘင်္ဂါလီမူဆလင်တွေမှာ တစ်ဘက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ုနိုင်ငံထဲမှာ ဆွေမျိုးတွေမှတပုံကြီး ဒါကိုလေ့လာဖူးလား ဆန်းစစ်ဖူးလား ? ဒီနေ့လည်းကြည့် ကလေးကလေးဝက်ဘက်မှာ ခိုးဝင်နေတာကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ုနဲ့ ဒီလောက်နီးတဲ့ ပြည်နယ်မှာ ဘယ်လောက်ခိုးဝင်ခဲ့မည်ဆိုတာကို ခန့်မှန်းနိုင်တယ်။ ဘင်္ဂါလီတွေ ဒီလိုခိုးဝင်ပြီး ရခိုင်ဘက်မှာ တစ်နှစ်လောက်ကြာနေပြီးတာနဲ့ ရန်ကုန်နှင့်တခြားပြည်နယ်တွေ တိုင်းတွေကိုသွားနေလို့ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ နဝတ အတွင်းရေးမှူး(၁) ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် ရခိုင်ဘက်က ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တွေကို ရခိုင်ဘက်ကနေ ဘယ်ကိုမှ မသွားရဘူးဆိုပြီးသွားလာခွင့်ကိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အဆင့်ကို
ရောက်သွားတယ် ဒါကို စာရေးသူသိရဲ့လား? ဒီလိုပိတ်လိုက်လို့ ဒီနေ့ ရန်ကုန်နှင့်တခြားတိုင်းတွေ ပြည်နယ်တွေမှာ အခု ရခိုင်ဘက်မှာပြဿနာဖြစ်
သလိုဖြစ်မလာခဲ့တာလို့သာပြောရမည်။ မဟုတ်ရင်းလား ဒီနေ့ ဗမာတွေ ရှမ်းတွေ ဒုက္ခသည်ဖြစ်နေလောက်ပြီး အိမ်တွေမီးလောင်နေလောက်ပြီ။
Reply	ကိုအေး November 6, 2012 - 8:20 pm	မှန်တာပေါ့။ ကျွန်တော်ကြားဖူးသလောက်ဆိုရင် ဘင်္ဂါလိမူဆလင်တွေက ရခိုင်ဘက်ကနေ မြန်မာပြည်ထဲကို ခိုးဝင်ဖို့အတွက် ဘင်္ဂါလီသူဌေးတွေကထောက်ပံ့တယ်ဆိုပေ။
Reply	true talker November 6, 2012 - 7:41 pm	In Burma, we need many educated and knowledge,encyclopedia wise person like you. Because even many literature educated, people also does not know what is race,religion,ethnic, etc:…..in other way,the former Military Government also wants to be happened many events,like race and religion problems,that they have created since,Intelligent foxy minded Khin Nyunt time till now.
Reply	ရဲဝင်း November 6, 2012 - 7:47 pm	ကနေဒါလိုနိုင်ငံမျိုးမှာ Red Indian (ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကအ တန်း ကျောင်းတွေမှာ သင်ရတဲ့ အက်စကီးမိုး) တွေဟာ နေ့ တစ်ဖ် တွေဖြစ်ပါတယ်။ <<< ကနေဒါနိုင်ငံမှာ ပါရဂူဘွဲ့ရယူနေတဲ့သူက ဒီလိုရေးပါတယ်။ Ethnic နဲ့ Native ကို ဇွတ်ခွဲခြားပြချင်ပြီး တတ်ကျွမ်းနားလည်သူအဖြစ် ရေးသားချင်သူစာရေးဆရာက Red Indian နဲ့ အက်စကီးမိုး ကွာခြားပုံကိုတောင် သေချာမသိပါ။ အမေရိကန် CowBoy ကားများထဲမှာ မျက်နှာကိုအစင်းများဆွဲ လူရိုင်းကဲ့သို့ဝတ်ဆင်ပြီး မြင်းစီးကာ မြှားပစ်နေသောသူများသည် Red Indian များဖြစ်ကြပါတယ်။ ကနေဒါအထက်ဖက် မြောက်ဝင်ရိုးစွန်း အတ္တလန်တစ်နဲ့ နီးသောဒေများမှာနေကြတဲ့ အက်စကီးမိုးတွေဟာ ဝက်ဝံသားမွှေးများဖွာနေတဲ့ အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ကာ ရေခဲပြင်ပေါ်မှာ ၂ဖက်အသွားပါလှံကိုင်ဆောင်ကာ နှင်းထုရေခဲဖြင့်တည်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာ နေထိုင်ကြတဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်။
မည်သူမှမမှားယွင်းနိုင်သည့်အချက်ကို ပါရဂူဘွဲ့ယူသည့်သူက မှားယွင်းစွာမှတ်သားထားသည်မှာ လက်ခံနိုင်စရာမရှိသည့်အပြင် ကြိုးစားရေးသားထားသည့် ဆောင်းပါးတပုဒ်လုံး အဟောသိကံဖြစ်သွားရရှာသည်။ ဧရာဝတီအယ်ဒီတာများလည်း ဗဟုသုတညံ့ဖျင်းကြသည် သို့မဟုတ် စစ်ဆေးမှုမရှိကြသည် မှာ ၁၀၀%သေချာနေသည် တမုံ့။
Reply	=== November 7, 2012 - 2:50 pm	မသိပဲနေပါ့မလား မောင်ရာ၊
ငါ့လူသာ ပြန်လေ့လာပြီး ပြောကြည့်လိုက်ပါဦးလေ။
အမေရိကန်တွေ ကနေဒါကို သွားပြီးကျူးကျော်တော့ ဟိုမှာအခြေချနေတဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့တွဲပြီး အမေရိကန်တွေကို ဘန့်ဘိုးပေးခဲ့တာ Red Indian တွေပါ။ စစ်တိုက်လေ့မရှိတဲ့ အက်စကီးမိုးတွေက မြောက်စွန်းပိုကျကျမှာနေပြီး သူတို့ထဲက အုပ်စုသေးသေးလေးတစ်စုက သူတို့ကို အက်စကီးမိုးလို့ မခေါ်ကြပါနဲ့၊ Inuits လို့ ခေါ်ကြပါဆိုလို့ သူတို့ဆန္ဒအတိုင်း ခေါ်ကြရသေးတယ်လေ။
ဒါတွေက ခက်ခဲနက်နဲတဲ့ အရာတွေမဟုတ်ပါဘူး ဂူဂယ်လုပ်လိုက်ရင် ၂ စက္ကန့်ပဲကြာပါတယ်။
Reply	ရဲဝင်း November 8, 2012 - 4:40 am	ဒီလိုသိနေရင်လဲ စာရေးသူက Red Indian တွေက Eskimos တွေပါလို့ ညွှန်းဆိုရပါသလဲဗျာ။ Red Indians and Eskimos are totally different. တခုခုကိုပြန်လှန်ပြောမယ်ဆိုရင် စာကိုသေချာဖတ်ပြီးပြောရင် လူလေးစားနိုင်ပါတယ်။
Reply	emerald.www November 8, 2012 - 7:24 pm	မှန်ပါ့မောင်ရဲဝင်း။အပေါ်ကလူမှားတယ်
Reply	no name November 10, 2012 - 6:16 pm	ကျုပ်အထင်ပြောရရင် ခင်ဗျားဟာ ဆောင်းပါးရေးသူပဲ။ ကျုပ်ကွန့်မန့်ကို မဖျက်ပစ်ပါနဲ့။
Reply	ကိုအေး November 6, 2012 - 8:27 pm	ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တွေမှာ တခြားဘာသာဝင်တွေပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေကို တရားသဖြင့်ပေ ဖြစ်ဖြစ် မတရားသဖြင့်ပေး ဖြစ်ဖြစ် သိမ်းယူနိုင်ရင် ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုပါလား။ကြောက်စရာပေ။ လဝကဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပြောဖူးတာက ဒီဘင်္ဂါလီမူဆလင်ကုလားတွေက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ုနိုင်ငံကနေမြန်မာပြည်ထဲကို စဉ်ဆက်မပြတ်ခိုးဝင်နေကြတယ်ဆိုပေ။ ဒီလိုလေး ခိုးဝင်လိုက်တာနဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ရော့လား။ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရော့လား။ ကျွန်တော်သိ့တာက တိုင်းရင်းသားဆိုတာ နဂိုဓါးမဦးချနေထိုင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးကိုခေါ်တာလို့သိတယ်။ ဒီလို ခိုးဝင်နေတာလည်း တိုင်းရင်သားလို့ အသိအမှတ်ပြုပေးရမှာလား ဒါတော့မပြုနိုင်ဘူး။
Reply	=== November 7, 2012 - 3:54 pm	သူများပြောတိုင်းယုံပြီး အပေါ်ကရေးထားတဲ့စာကိုလည်း သေသေချာချာမဖတ်တဲ့ မောင်ရင့်လိုလူတွေကြောင့် ခက်နေကြရတာကွဲ့။
ငါတို့လည်း ရိုဟင်ဂျာကို မချစ်ပါဘူး။ သို့သော် ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးဘာသာ တိုင်းပြည်သိက္ခာကို ငဲ့ရသေးတယ်။ လူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုတာလည်း ပစ်ပယ်လို့မရဘူး ငါ့လူရ။ ငါ့စကားနွားရ ပြောလို့မဖြစ်ဘူးကွ။
စိတ်အေးအေးထား၊ စာကိုအသေချာဖတ်၊ ကိုယ့်ပါကိုယ် လူလို့သာမှတ်၊ ဘုရားတရားကို မမေ့နဲ့၊ အမုန်းပေးရင် အမုန်းပဲပြန်ရတတ်တယ်ကွဲ့။
Reply	Myo Tha Gee November 6, 2012 - 8:35 pm	“All the way from Chanpour to Barratulla we have had low hills between us and the sea: but now there is nothing in that direction except plains, these in some places however are covered with woods. Various parts of the Hills in this neighborhood are inhabited by Mugs from Rossawn, Rohhawn, Roan, Reng or Rung, for by all, these names are for Arakan called by the Bengaleese (p.31).”
(Francis Buchanan in Southeast Bengal -1798, University Press Limited, Dhaka, 1992)
Whatever they name theirself “Rohingya” or any other term is not problem for Myamar and Rakhine. But, have you ever considered the core meaning of the term Rohingya which are directly stealing and damaging the native Rakhine’s glory and dignity. They (Bangli immigrants) can give what they like and how they wish. But, can they name them as Myanmar or Myanhingya, etc. which is effecting the existing term. That is the main problem between native Rakhine and so-called Rohingya. We call Chinese as Tayoke. But, they don’t know. Bangli call Rakhine as Mug, Arakan as Rohhawn. But Arakanese did not know. Now they (Bangli immigrants) are stealing and using this term. So, this is notapeaceful term between Arakanese and Bangli immigrants.
Reply	သာထွန်းဝေ November 6, 2012 - 8:43 pm	၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေ ရဲ့ အရိပ်အာဝါသ အောက်မှာ ဘယ်ကောင်က နိုင်ငံသား ဘယ်ကောင်က နိုင်ငံခြားသားလဲ ဆိုတာ အဖြေပေါ်လာမှာပါ အထောက်အထားပြနိုင်ယင် ချမ်းသာခွင့်ရမယ် ဘာသက်သေခံမှ မပြနိုင်ယင် အချုပ်၊ ထောင်၊လဝက ထိမ်းသိမ်းရေးစခန်းနဲ့ ညားဖို့ သာပြင် ….. ရိုဟင့််ဂျာသည် အက်သနစ် ဟုတ်မဟုတ် အက်ဆစ်
ဟုတ်မဟုတ် မူဆလင် ဟုတ်မဟုတ် တမန်တော်မိုဟာမတ်နဲ့ ဆွေမျိုးတော်မတော် စစ်ဆေးနေစရာမလို နိုင်ငံတော်
နှင့် နိုင်ငံသားများကို ထိပါးစော်ကားလာတဲ့ အတွက် နောက်ဆုံးရွေးချယ် စရာဒီတစ်လမ်းပဲ ရှိတယ်။
Reply	မဟာမြန်မာ November 6, 2012 - 9:33 pm	ညီနောင်တို့ဆွေးနွေးသွားတာတွေကိုဖတ်ကြည့်ရပြီး အရမ်းကို အားရပြီး ကျေနပ်မူရတယ်ဗျာ……မှန်ပါတယ် ကြိုက်သလို ပြောင်းလို့ရတယ်…..ဒါပေမယ့် မူရင်းမျိုးနွယ်ကို ရှိကို ရှိရတယ်…..ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျက ဘယ်လက်ခံတော့မလဲ…..ရှမ်းပြည်နယ်လောက်မှာ လူဦးရေ သန်း၁၀၀ ကျော်နေပြီလေ……အသက်ရှုတောင်မဝကြတော့တာ မြန်မာပြည်က ဒီဘင်္ဂလီ ချီးထုပ်တွေကို ဘယ်ပြန်လက်ခံချင်တော့မလဲ…….တွေးကြည့်ကြတော့ဗျာ……ဒါကြောင့် ဒီကောင်တွေ ဒေါင်းယောင်ဆောင်ချင်နေကြတာ…….ဒါပေမယ့် ကျီးက ကျီးပဲ……..ကျွန်တော်တို့ ကချင် ကယား ကရင် ချင်း ဗမာ မွန် ရခိုင် ရှမ်း အကုန်လုံး ညီညွတ်မှ ရမယ်……. ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး……ဟိန္ဒူ ခရစ်ယာန်တွေနဲ့အေးဆေးနေလို့ရပေမယ့် ကျန်တဲ့ ဘာသာတစ်ခုကတော့ လုံးးဝအဆင်မပြေဘူး……….ကျန်တိုင်းရင်းသားတွေလဲ စဉ်းစားကြပါ……..
Reply	Nyunt Shwe November 6, 2012 - 10:03 pm	၁။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ဝေါဟာရရဲ့မူလအသုံးဟာ ရှေးခေတ်ဘင်္ဂါလီတွေက ရခိုင်သားတွေကို ခေါ်တာဖြစ်တယ်။
၂။ ဘင်္ဂလားဖက်မှာ ရခိုင်တွေရှိတယ်၊ လူမျိုးတွေဟာ နယ်စပ်တိုင်းမှာ ဟိုဖက်သည်ဖက် ခွနေတယ်။
၃။ အခုမြန်မာပြည်ခြမ်းမှာ ရိုဟင်ဂျာရှိရင် ဘင်္ဂလားမှာလဲ ရှိရမယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဘင်္ဂလားမှာ ရိုဟင်ဂျာမရှိဘူး။ တရားဝင်ကြေငြာထားတယ်။
၄။ ၁၉၄၇ မူဂျာဟေဒင်သူပုန်ထတယ်၊ အဲဒီတုန်းက ရိုဟင်ဂျာနာမည်ကို မမွေးစားရသေးလို့ လုံးဝ မသုံးခဲ့ဘူး။
၅။ ၁၉၅၀ ကျော်လာမှ လုပ်ကြံသုံးစွဲလာတာဖြစ်တယ်လို့ သမိုင်းဆရာတွေ ရေးခဲ့ပြီ
၆။ အလားတူ ခိုင်မာတဲ့သက်သေအနေနဲ့ ဗြိတိသျှတွေ ၃ ခါလောက် ကောက်ခဲ့တဲ့ သန်းခေါင်စာရင်းမှာ တစ်ခါမှ ဒီနာမယ်မပါဘူး။
၇။ ဒီဘင်္ဂါလီမုစ်လင်တွေဟာ အက်သနစ်မဟုတ်ဘူး။ စစ်တဂေါင်းဘင်္ဂါလီနဲ့ အကုန်တူတယ်။ သီးခြားလုပ်လို့မရဘူး။
၈။ မြန်မာပြည်ထဲရောက်နေတဲ့အုပ်စုနဲ့ မူရင်းစစ်တဂေါင်းဘင်္ဂါလီတူတယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာ့ပညာရှင်တွေ ပြောပြီးပြီ။
၉။ နားမလည်ပဲ ရှေ့နေလိုက်နေတဲ့ကောင်တွေကို အသားထဲကလောက်မထွက်နဲ့လို့ပဲ သတိပေးလိုက်တယ်။
သားရေပေါ်အိပ် သားရေနားစားတွေရဲ့ အလိုတော်ရိတွေ ငါ့ကိုမကျေနပ်ရင် မှန်ရှေ့ရပ်ပြီး ကိုယ့်ရုပ်ကိုကြည့်၊ ပြောရဲသေးရင် ထပ်ပြောလှဲ့။ ဒီနိုင်ငံကို ငါတို့ ဘိုးဘွားဘီဘင်တို့ရဲ့ သွေးနဲ့တည်ဆောက်ထားတာ၊ ကျွေးတဲ့လက်ကို ကိုက်ပြီး အကုန်သိမ်းချင်တဲ့ကောင်တွေကို ဒိထက်ပိုပြီး သီးမခံနိုင်ဘူး၊ အေးအေးဆေးဆေး ရိုရိုကျိုးကျိုးနေတတ်ရင် ဘယ်သူကမှ အနိုင်အထက်မလုပ်ဘူးဆိုတာမှတ်။ ငါတို့မှာလဲ လူ့နှလုံးသားနဲ့။
Reply	=== November 7, 2012 - 6:07 pm	(၁) ရခိုင်တွေက အဲသည်လူတွေကို ရွှင့်ဂျာလို့ခေါ်တာလည်း မမေ့နဲ့ပေါ့။
(၂) လူမျိုးတွေ နယ်စပ်တိုင်းမှာ ခွနေတယ်ဆိုတာ လက်ခံလို့ရတယ်။ ဒါကို နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီး ဆွေးနွေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
(၃) ဘင်္ဂလားမှာ ရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးဆိုရင် ဒါ နိုင်ငံအလိုက်ဖြစ်လာပြီ။ ကမ္ဘာကို တရားဝင်ချပြပါ။ မှန်ရင် ပြောရဲရမယ်၊ အားလုံးရှေ့မှာ ဖြေရှင်းရဲရမယ်။ ဆဲရဲတာ လူနည်းစုကို အနိုင်ကျင့်ရဲတာမျိုးကို ဆန့်ကျင်တယ်။
(၄) ၁၉၄၇ မူဂျာဟစ်ဒင်သူပုန်ထတယ်၊ ဟုတ်တယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့နာမည်ကို မမွေးစားရသေးတာဟာ အပြစ်တစ်ခုမဟုတ်။ ကမ္ဘာမှာ ဒါမျိုးက အများကြီး။
(၅) ၁၉၅၀ ကျော်မှာ စတင်သုံးစွဲလာတာကို လုပ်ကြံသုံးစွဲလာတယ်လို့ တစ်ဖက်စောင်းနင်း မစွပ်စွဲကောင်းဘူး။ သမိုင်းဆရာတွေရေးတဲ့အထဲမှာ လူမျိုးတွေဟာ ကိုယ့်နာမည်ကိုယ် ကြိုက်သလိုခေါ်လာကြတယ် ဆိုတာတော့ ဘာလို့ ထည့်မပြောတာလဲ။
(၆) ၁၉၅၀ လောက်မှ နာမည်ပြောင်းလဲသုံးစွဲတာကြောင့် ဗြိတိသျှစာရင်းမှာ မူဆလင်အနွယ်၊ ကုလားအနွယ်လို့ပဲ ပါခဲ့တာပေါ့။ လူဦးရေကိုကော သိပြီးပြီလား၊ အဲဒီကတည်းက ရခိုင်လူမျိုးတွေထက် နည်းနည်းပဲနည်းတယ်။
(၇) Ethnic ဆိုတာကို အပေါ်ကစာဖတ်ပြီး နားမလည်သေးဘူးနဲ့တူတယ်။ စစ်တကောင်းဘင်္ဂါလီနဲ့ အကုန်တူတယ်ဆိုရင် သက်သေသာပြလိုက်၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးကလူတွေက ငတုံးငအတွေမဟုတ်ဘူး။
(၈) သမိုင်းပညာရှင်အချို့က ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ဘင်္ဂါလီ ဘာသာစကားကွဲတစ်မျိုးကို ပြောတယ်လို့သာ ဆိုခဲ့ကြတာ၊ အားလုံးချွတ်စွပ်လို့ ဘယ်သူမှ မပြောသေးဘူး။
(၉) အကြောင်းမဲ့ သဲသဲလှုပ် မုန်းတီးအပြစ်ရှာ တိုက်ခိုက်နေသူတွေကို နားမလည်တာတော့ အမှန်ပဲ။ အသားထဲကလောက်ဆိုတဲ့ စကားမျိုးကို အစကတော့ ကြောက်ဖူးတယ်။ သတိပေးတာ ကျေးဇူး။
သားရေပေါ်အိပ်သားရေနားစားရအောင် မောင်ရင်က ဘယ်သူ့ရဲ့ ဆွေတော်မျိုးတော်မို့တုံး၊ မြန်မာပြည်ကြီးကို ပိုင်တဲ့လူလား။ အင်တာနက်ထဲမှာပြောရတာ အားမရတာတော့အမှန်ပဲ၊ ရှေ့တည့်တည့်မှာရပ်ပြီး မေးချင်နေတာ။
ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေရဲ့သွေးနဲ့ ဘယ်နိုင်ငံကို တည်ဆောက်ထားတာလဲ၊ အတိကျပြောပြရင် အတိအကျ ပြန်ဖြေပေးမယ်။ ပြီးတော့ကိုယ့်လူက ဘယ်သူ့ကိုဘာကျွေးဖူးလို့လဲ။ ရိုရိုကျိုးကျိုးနေရအောင် ကိုယ့်လူက အနိုင်ကျင့်ရတာ ဝါသနာလား၊ ဒါအသည်းနှလုံးထဲက ထွက်ကျလာတဲ့စကားလား။ အဲဒါမျိုး ပြောတဲ့လူမှာရှိတာ လူ့နှလုံးသားလား။
Reply	emerald.www November 8, 2012 - 7:57 pm	ခင်ဗျားဘာလဲတော့မသိဘူး။အားလုံးကိုလိုက်ဖိုက်နေတာတော့တွေ့ တယ်။ခင်ဗျားဖတ်ကြည်လိုက်ဦး။လင့်ပေးထားတယ်။ကျုပ်ကွန်မန့် မှာ။ခင်ဗျားပြောသလိုမူစလင်အနွယ်လို့ ဘဲပါတယ်လို့ဆိုရင်ဟိုးမြိုတို့ခမီတို့ ၊ဟိုးမြန်မာပြည်အတွင်းပိုင်းကတိုင်းရင်းသားတောင်ပါသေး။အဲဒီစာအုပ်မှာပါတယ်။ရခိုင်မှာလူဦးရေတိုးပွားလာတာ စစ်တကောင်းကခေါ်လာကြတာ၊အလုပ်လာလုပ်ကြတာကစတာ။အဲဒီစာအုပ်ဖတ်ကြည့်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်။နာမည်ခေါ်ချင်သလိုခေါ်လို့ ရမရ ကျွန်တော်ကွန်မန့် မှာဖတ်ကြည့်ဆွေးနွေးလို့ ရတယ်.။ခင်ဗျားပြန်လာလို့ ဖတ်မိရင်ပေါ့
Reply	=== November 9, 2012 - 7:37 pm	မင်းဘာလဲ ငါလည်းမသိဘူး။
ဘယ်မလဲလင့်၊ အခြားမှာရှာဖို့ အလုပ်ပိုလာမပေးပါနဲ့၊ ကျုပ်မှာခင်ဗျားအတွက် အချိန်ပိုမရှိဘူး။
ဘက်မလိုက်တဲ့ သုတေသနစာတမ်းရှိရင်ပြော ဖတ်မယ်။
အခြား ငါ့စကားနွားရပြောနေတဲ့ ရာထောင်ချီတဲ့ မျက်ကန်းတွေရဲ့ လိုရာဆွဲစာတွေအတွက် အချိန်မရှိဘူး။
“ကျွဲ”ကို လူအယောက်တစ်သန်းက “ကြောင်”လို့ပြောလဲ “ကျွဲ”ဟာ”ကျွဲ” ပဲ။
Reply	emerald.www November 9, 2012 - 11:19 pm	If you haveapair of eyes, you can see.This is record.whataresearch?Research base on facts, figures and documents.This is one of the document recorded by British who brought you to Araka .Not by Arakanese,Not fake history like you Bangali created.If you want to debate,please come to my facebook page.if you want face to face debate,please tell me.I will tell you later how.OK?
Wrongya November 10, 2012 - 6:06 am	You said,you don’t have extra time?haha,why?Reading Bingali history written by your shwe myo pout phaw?Or, fghtig for Rohinnja freedom/own state?That why you looks so busy.Allah bless you.
Joe Nay Joe November 15, 2012 - 2:42 am	Before challenging people for debate.. lets check ur IQ level…. Who were the people in Danyawady? Mongoloid Rakhine Mogh? huh which language did they used in Danyawady? Rakhine language… oh damn not… Then who were they and what was their language? you better ask Aye Chan! He knows better i think….. OK for your info! Those people were kalar and their language was alsoakalar language… theose kalar are today known as ROHINGYA…. what the hell make you believe Rohingya are british settler?
Bangal and Arakan share both plain and water border whereas Arakan is totally divided from mainland Burma… have you ever heard of Bagal invading Arakan? Why Bangal king didn’t invade arakan and why did Bangal king help Arakan king to get the lost throne back? Dude ! before you answer my questions! I want to test you IQ leve–> what is 1+2?
write first 10 Fibonacci series!
When did US-Afghan war begin?
How many soldiers took part in the war?
How many years need to defeat Afghan byasuper power? Now comes to main point!
How many soldiers did Bangal king send to fight Bamar king?
Do you believe that Bangal fighers win the war within weeks? (Hint: US launches the Afgha War in 2002 and its still going for more thanadecade).
How many years needed to get victory by Bangal soldiers against Bamar king? make an approximation..
Did the Bangal Army spend all their life fighting without having the physical (sexual) pleasure during war? ( Hint: in those time, king used to supply the chosen beauties of the nation to entertain the army ). If Bangal army have had physical pleasure with Local girl, where is their generation gone? (Hint: Condom isarecent development and Kaman came hundreds of years later! Don’t mess up Kaman with Bangal Army).
After the victory, did Bangal soldiers came back to Bangal or stay there in Arakan forever? ( Hint: Mosques build using stones in Arakan on those days! To collect stones and polished then to fit in wall take years).
Burma is completely divided from Arakan by Arakan Ruma even thought Burmese king managed to invade Arakan manay times and finally they took the great image before British came.If Bangal share plain and water border with Arakan, then why you think Bangali waited on the bank of Naf river for British to cross the river? If an average rickshaw puller in Teknaf earn 500+ takaaday, why willabangali go to arakan where the labor cost is no more than 2000 kyat (~200 taka)? If an average Bangali can fulfill all his inner desires ( freedom), why wouldabangali migrate in Arakan where everything(travel, education, merriage, religious practices, properties etc..) is restricted for bangali look alike people?
than oo November 21, 2012 - 11:31 pm	ငါ.စကားနွား၇ပြောနေတာ ညီမျှချင်းသုံးခုလို.ကျတော်ထင်တယ်.
တဖက်သားကိုဆွေးနွေးသလိုလိုနဲ.ငါသိငါတက်နှက်နေပြီး သူတပါးကိုတော.နှလုံးသားလှဖို.ပြောနေတာ နည်းနည်းတော.
Joe Nay Joe November 15, 2012 - 2:26 am	British were invader , their motto was divide and rule … Why should we Rohingya need to rely on British documents by abandoning the brilliant history of our forefathers who were the king maker of Arakan? Did British recod Rakhine as Rakhine? Why you hesitate to be called as Mahg as did British called you?
Arakan history is not start from British Occupation, she hasaglorious history of past where Rohingya playedagreat and praise worthy rule… For your information, Readabook written before Bristish invasion, then you will be enlighten and aware of the existence of Rohingya and their language in Arakan long before Britsh Invasion . http://www.scribd.com/doc/22066087/Francis-Buchanan-A-Comparative-Vocabulary-of-some-of-the-Languages-Spoken-in-the-Burma-Empire-1799
Reply	mhoesan November 25, 2012 - 9:34 am	Bravo! ကိုညွှန့်ရွှေ
Reply	Lay hone November 6, 2012 - 10:30 pm	What is that ? Editorial ,author Mo Chaudhury,Topic ,Rohingyas and Bangladesh, on NOV5Dhaka The Daily Star newspaper page 14 colum 3, distributed almost one millionaday, published ” sucharedress would perhaps involve creating an autonomous Rohingya- majority territory in Myanmar carved out of north -western Rakhine with its political and governance structure”.
It is “Clarion”.
Reply	ွှ့Thida Aung November 7, 2012 - 2:01 am	တိုင်းပြည်အပေါ်သစ္စာရှိမရှိ၊ စည်းကမ်းနဲ.ညီမညီဆိုတာလေးလဲ စာရေးသူက အဆုံးသတ်ပေးနိုင်မလား။
အင်္ဂလန်မှာဖြစ်ခဲ.တဲ. မြေအောက်ရထားဗုံးခွဲတဲ.ဖြစ်စဉ်တွေ၊ တလောလေးကမှ အမှုစစစ်နေတဲ. ဖောက်ခွဲဖို.ကြံစည်မှု တွေမှာ ဘယ်သူတွေပါတာလဲလို. ပြန်ကြည်.လိုက်စေချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားပေးတိုင်း ပြဿနာအေးမယ်ထင်ရင် ကလေးအတွေးသာ ဖြစ်နေပါလိမ်.မယ်။
လက်မခံနိုင်တာဟာ လက်မခံနိုင်သူတွေရဲ. ပညာမဲ.မှု၊ ခေါင်းမာမှုလို. မြင်တဲ.အမြင်ဟာလဲ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုမဲ.စွာ အနောက်ဆန်ခြင်းလို.ခံစားရပါတယ်။ ကျမလဲ အနောက်မှာ ပညာသင်လာသူပါ။ ဒါပေမယ်. မြန်မာဟာ မြန်မာ.အသဲနှလုံးကို သစ္စာမဖောက်သင်.ဘူးလို. ခံယူပါတယ်။
Reply	luthitlay November 7, 2012 - 10:38 pm	အေးဗျာ ခင်ဗျား ပြောတာကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါတယ် အမှန်တော့ စာရေးတဲ့သူဟာ အသုံးမကျလို့သာ သည်စာမျိုးကို ရေးတာပါ သည်လို အရေးအသားမျိုးကို ကျနော်လဲ မခံစားနိုင်ပါဘူး၊ အခုခေတ်မှာ နိုင်ငံခြားက ပါရဂူဘွဲ့ဆိုတာ လူတော်တော်များများ ရနေကြပါတယ်၊ ကျနော်လဲ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်ဖူးပါတယ်၊ မြန်မာ ဟာ မြန်မာပါဘဲ။
Reply	Myanmarpyithar November 7, 2012 - 6:34 am	It’s no point talking about ethnic or indigenous or what so ever, now.
Don’t re-ignite the issue.
Most of the leaders had already expressed their stand – that is Rohingya is not Myanmar native. And Bangladesh had also said Rohingya id not Bangladesh native. So what is the point analyzing Ethnic?
If you can’t offerasolution, don’t confuse people
Reply	FOX November 7, 2012 - 11:42 am	ရိုဟင်ဂျာကသူတုို့ကိုသူတို့ ရိုဟင်ဂျာပါလို့ပြောတာဘာဖြစ်လဲ…ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ်ကြိုက်တာပေးမှာပေါ့…အဲ့ဒါကိုအတင်းဘင်ဂလီလုပ်နေကြတယ်… သမိုင်းကိုလည်းမသိဘဲနဲ့ကိုယ်မျိုးချစ်ရခုိုင်တို့အတင်းမညင်းကြပါနဲ့… နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်လို့ဟုတ်ရင် မင်းတို့လက်ခံ…
Reply	ဘဂျမ်း November 7, 2012 - 7:52 pm	Fox ကတော့ Fox စကားပဲပြောတတ်မှာပေါ့ ။
သမိုင်းကြောင်းကိုသိရင် အဲလိုရေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Reply	yanyan htet November 8, 2012 - 2:44 am	hoon hoon!!! right i don’t want to be argue with u,but i wanna listen from u explain to me pls -how is our ethinc and how we have to give them nationally ,u know why i ask u- i already explain about my issue up u can find out even they r buddish i can’t accept because simple what i know is they r banglish , ok- how i knew easy i born in myanmar and grew up so that mean i can feel and i knew about rogina what r they ?they r banglish ,isn’t .not only me my parents also knew that .i learn from school ,i know about myanmar story who live in myanmar- ka chin-ka yar, ya khine, shan so -so.whatamain issue is in myanmar about rogina r not our nationally we told to the world already- we mean not only ya khine–understant.so one of the nationally is say or some one leader from goverment or some 8888 leader or so so?i didn’t hear that , but “only who live outside muslin ppl and who live in myanmar-muslin get nationally already r say” so u may also muslin ,isn’t. i’m right? i told ya how many time notabig issue with muslin or buddish, because i can’t accept china or india or thai who is buddish if they say they r myanmar, now u understant .yep u and writer-simon r right – they r rogina .they can change name that not our problem but listen not our nationally .we can change name also now is myanmar before burma still we r..what ever also shan what ever we like , depents on goverment, but not for other ethinc, we don’t care and intersting, but if they r say apart of ya khine..thatatoo funny mate,ok pls explain me histroy if u really strong that issue u should prove it man.
Reply	Myanmar boy November 8, 2012 - 6:26 am	Can you tell me some history that you knew about?We are not just talking about the name of Bingali or Rohinnja.Burmese can not give a(another name) name by them self in Thailand.They will call you “Phama”(in Thai language).Phama is Phama.So,Bingali is…..?
Reply	nyan linn chit November 7, 2012 - 3:43 pm	်ပါရဂူကြီး
ရှင်းရှင်းလေး ပါ။သမိုင်းအထောက်အထားတွေအရဘယ်တုန်းကမှ ရိုဟင်ဂျာ မရှိပါဘူး။အဲဒါကိုဝန်မခံရင် အခြေအနေကောင်းတွေ ဖန်တီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အရမ်းမဖွပါနဲ့။
Reply	အောင်သူ November 7, 2012 - 9:00 pm	သိပ်မှန်တာပေ့ါ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာကို ပြောနေသုံးနေသ၍ ရိုဟင်ဂျာတည်တံ့ခိုင်မာလာရေးကို ပို့ဆောင်ပေးနေသလိုဖြစ်နေပါမယ်.. ဘင်္ဂါလီလူမျိုး-အစ္စလာမ်ဘာသာကောင်များဖြစ်သည် မှာ အမှန်ဖြစ်ပါတယ်… လွန်ခဲ့သည့် ၁၂ နှစ်ကျော်ကာလထဲက ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ ကိုသိလာရတဲ့ စစ်အစိုးရနှင့် ထောက်လှမ်းရေးညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွန့်ဟာ ဘင်္ဂါလီတွေတိုးပွားမှုမရှိအောင် ဒေသန္တရ ဥပဒေတွေနဲ့ထိန်းသိမ်းလာတဲ့နောက်ပိုင်း -ို-င်-ျာ ဆိုတာကို ဒိထက်မကပြန့်ပွားသိရှိလာအောင် ပြုလုပ်လာတာကို အစိုးရကအသိဆုံး ဖြစ်ပါတယ် အချက်အလက်တွေလည်းအများရှိနိုင်ပါတယ် အခြေအနေမပေးသေးလို့ အစိုးရကမချပြသေးတာပဲလို့ ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်…
Reply	kyawmintun November 8, 2012 - 10:41 am	ဧရာဝတီသတင်းစာတိုက်ကို အကြံပေးချင်းတာက ဒီလိုကလေးအတွေးစာတွေကို မတင်ပါနဲ့လို့။ စာဖတ်သူတွေကိုလေးစားပါ။ ကျွန်တော့်မှတ်ချက်ကို မဖျက်လိုက်ပါနဲ့။
Reply	Thar Aung November 8, 2012 - 10:46 am	ကိုယ့် မျက်ချီး ကိုယ် မမြင်သော် သူများ ။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ နိုင်ငံတကာမှာ ခိုးနေကျ ၊ တရားဝင်နေကျ ၊ သူများ နိုင်ငံတွေမှာ အတင်းနေကျ ၊
သွားလိုက်ကျတာ အများကြီး ၊ နေချင်လိုက်ကျတာ နန့်နန့်တက် ။
မည်သူ.ကိုယ်မဆို ဒုက္ခပေးချင်း ၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းက ၊ ကောင်းပါ သလား ။ ၀၀၇ တွေလား ။
မှန်ကန်သော် တရားဥပဒေ အမှန်ရှိသင့်သည် ။
တရားသော် ၊ မှန်ကန်သော် ၊ သတ်မှတ်ချက်မျိုး နှင့် မှန်သူ စံ ၊ မှားသူ (တရားမ၀င်သူ) သွား ၊ စသည်ဖြင့် ရှိသင့်သည် ။ အင်တာနက်ကို သူတို. အစိုးရကို တိုက်ခိုက်လျှင် ချုပ်ထိန်းလိုက်ကျတာ ။
အခုကျတော့ လွတ်ထားတယ် ။ ဘာ ထိန်းချုပ်မှုမှ. မရှိ ။ သူများ နိုင်ငံကောင်းတွေမှာ ဒီလိုဘဲလား ။ ဘာလို. တိုးတက်နေကျတာလဲ ။
Reply	alibaba November 8, 2012 - 7:47 pm	yes,they should control your net work first.So,we can not see puppy comment again from you.People from Myanmar are just go and work and living in oversea.They are not going to stealingapiece of land from others country.ok,Mg Thar Aung lay.Allah bless you.
Reply	no name November 10, 2012 - 6:26 pm	your right,
Reply	စာဖတ်သူ November 12, 2012 - 7:11 am	ကိုယ့် မျက်ချီး ကိုယ် မမြင်သော သူများ ။
မှန်ကန်သော တရားဥပဒေ အမှန်ရှိသင့်သည် ။
အခုကျတော့ လွတ်ထားတယ် ။ ဘာ ထိန်းချုပ်မှုမှ. မရှိ ။
We’ve too many racists and relegious extremnists here.
Reply	ranninsoe November 9, 2012 - 1:35 am	ဘင်္ဂလီလူမျိုးများသည် အင်္ဂလိပ်လက်အောက်တွင် နှစ်ပေါင်များစွာနေခဲ့ရသူများပီပီ သူတို့၏စ ကား စာပေများတွင်လည်း မူရင်းဘာသာစကားများတိမ်ကော ပျောက်ကွယ်လာပြီး နေတဓူဝ သုံးစွဲ လျှက်ရှိသောစကားများတွင် အင်္ဂလိပ်စကားကို ၄၀%လောက်သုံစွဲလျှက်ရှိကြပေသည်။ ဥပမာ ထိုင်ခုံ( Chair), စားပွဲခုံ( Chair) , ဥက္ကဌ (Chairman) စသည် စသည့်စကားလုံးများအပြင် လူပါတ်ဝန်ကျင်တွင်သွားလားလှုပ်ရှားနေသော လူအဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်း ပင်္လယ်နားတွင်နေ သူများကို (ဘွင့်ဂျာ) ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးသူများကို (ဇိုင်လာ) ၊ မြွေဖမ်းမြွေပြပြီး ဘသရပ်တည်နေသူများကို (ဘိုင်လာ) ဟုခေါ်ကြပြီး တနေတကျေးတွင် ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြသောသူများကို (ရွင့်ဂျာ) ဟုခေါ်ပေသည်။ အမှန်ကရွင်ဂျာဆိုသောစကားလုံးသည် အင်္ဂလိပ်နှင့် ဘင်္ဂလီစကားနှစ်လုံးကိုပေါင်းစည်ထားသော ဝေါဟရဖြစ်ပြီးနှိမ့်ချ၍ခေါ်သော ဝေါဟာရ စကားဖြစ်ပေသည်။( Wrong+gya)( အင်္ဂလိပ်+ဘင်္ဂလီ) (မှားသော+လူ) အမှန်ကပုံမှန် မဟုတ်သောလူအစုအဝေး ဒုက္ခသယ်များ အိုမဲ့အိမ်မဲ့များကိုခေါ်ဝှေါ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရေးသားစာတွင် ကြားခံစကားလုံးဖြစ်သော(g+g) မှာတူနေသောကြောင့် ရေးသားရာတွင်( Wrongya) ဟုရေးသား ခြင်းဖြစ်ပြီး နောက်တခုကတော့ လူတဦးတယောက်က ယင်းနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘဲ မိမိသည်၎င်းနိုင် ငံသားပါဟု တောင်းဆိုလာသောအချိန်တွင် ပြည့်စုံလုံလောက်သော အထောက်အထားတင်ပြနှိုင် ခြင်းမရှိသူများကိုလည်း (Wrongya) ဟုဘင်္ဂလီစကားဖြင့်ခေါ်ဝှေါ်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ဘင်္ဂလီလူမျိုးများသည်ပုံမှန်အားဖြင့် အန်ဆိုလီဘာချာ ၊ ဆိုလတေဘာချာ ချာဒူးဘာချာ စကားသုံးမျိုး ကိုပြောဆိုကြသော်လည်း စစ်တကောင်းစကား ၊ န၀ါခါလီစကား ၊ ဂျာမာပူစကား ၊ ဆီလက်စကား၊ ဘောရီး ချားစကားတို့မှာလူသ်များပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း တရာမ၀င်အခြေချနေထိုင်လျှက်ရှိကြသော ဘင်္ဂလီများ စစ်တကောင်း အန်ဆိုလီဘာချာ စကားကိုသာပြောကြသောသူများဖြစ်ပေသည် တနည်းအားဖြင့်ပြောရ လျှင်သူတို့ပြောသောစကားမှာ စံမမှီသောစကားဖြစ်သည်သမက ယာဉ်ကျေးသော ဘင်္ဂလီအသိုင်းအ၀ိုင်း တွင်မသုံးစွဲတော့ပြီးဖြစ်ပေသည်။
သို့သော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံ၏တပိုင်တစကိုဆွဲထုပ်ပြီး အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတော်ထူထောင်လိုသူများ က လူမျိုးသစ်တခုတီထွင်ပြီး မွတ်ဆလင်းနိုင်ငံများတွင်တစတစ ၀ါဓဖြန်ရာမှတဆင့် မွတ်ဆလင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ လာတ်ပေးလာတ်ယူမှုများနောက်ကွယ်မှာ NGO များ INGOs များနှင့် ၄င်းတို့ နှင့်မကင်းရာမကင်းကြောင်းပါတ်သက်နေသော ကျင့်ဝတ်ပျက်မီဒီယာများမှ ရွင့်ဂျာ ဆိုသောဝေါ ဟာရကိုတလုံးတပါတမှမသိပါဘဲနှင့် စစ်အစိုးရကိုထိုးနှက်လိုသော ၀ါဓဖြန့်လက်နက်တခုအဖြစ် သုံးစွဲရာမှ ယနေ့မြန်မာမြေပေါ်တွင် မီးတောက်လောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီ မိမိနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီလမ်း ကြောင်းကို လျှောက်လှမ်းနေချိန်၌ အမွေးဆိုးများအဖြစ်၎င်းမီးစမီကျန်များမှ ယနေ့ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်လူမျိုးများ ကိုလောင်ကျွမ်းနေခြင်းသာဖြစ်ပေသည်။
I amaWrongya. I amaRefugee.ရွင်ဂျာဆိုသောဝေါဟာရကို နားလည်မှုလွဲမှားခြင်း စာရေးသူပညာသင်ကြားနေစဉ်ကာလ ဘင်္ဂလီများက ဗမာဂျာ ရွင့်ဂျာဟူ၍ကုလားသူငယ်ချင်း များကနောက်ကာ ပြောင်ကာခေါ်ကြပါသည်။ အမှန်မှာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဗမာပြည်သားဆိုပြီးနောက် ပြောင်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။
အဲဒီစကားကိုဘဲ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်ဘီဘီစီ ဗီအိုအေတို့မှ ခဏခဏ ကြားနေရပေသည် စာရေးသူအနေဖြင့် ရွင်ဂျာဆိုတာဘာလူမျိုးလည်းဆိုတဲ့ မေးခွန်းတခုအတွက် အဖြေကိုရှာ နေမိသည် သူငယ်ချင်းများကိုလည်းမေးစမ်းကြည့်မိသည်။ အမှန်မှာတော့ ရခိုင်ပြည်မှာ စစ်ဖြစ်လာလျှင်ဓါးစာ ခံမြေစာမြက်ပင်များဖြစ်မှာကိုစိုး၍ ထွက်ပြေားလာသော ဘင်္ဂလီလူနည်း စုများပြောသော anh wrongya ကျွန်တော်ရွင့်ဂျာ ဆိုသောစကားကို သတိရမိ၍ ငါဟာဒုက္ခ သယ်တယောက်ပါဆိုတဲ့စကားကို နိုင်ငံခြားသားတွေက ငါဟာရွင့်ဂျာလူမျိုးပါဆိုပြီး တလွဲနား လည်းခြင်းဟုစားရေသူသိလိုက်သောအချိန်တွင်ကောဒေါက်တာယူနိုးတယောက် လံကြုတ်ရွင့်ဂျာ သမိုင်းလိမ်ကိုရေးပြီးနေပြီဖြစ်ပေကသည်။
အမှန်ကဤသို့လုပ်ရပ်များသည် မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုထက် အလွန့်အလွန်ကြီးလေးသော လူမျိုးတမျိုးလုံကို အမြစ်မှမကျန်အောင် တူးဖေါ်ပြီးအစအနပါမကျန်အောင် ဖျောက်ဖျက် လိုက်ခြင်းဖြစ်၍ ကြီးမားလှသောပြစ်မှုကိုကျူလွန်းခြင်ဖြစ်သောကြောင့် ခွင့်လွှတ်၍ရသောဖြစ်မှု ကိုကျူးလွန်ခြင်းကားမဟုတ်ပေ။
ရှင်းရှင်းလေးပြောရလျှင် ရွင့်ဂျာဆိုသည်မှာ ဘင်္ဂလီဘာသာစကာဖြင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များကိုသာ
ခေါ်ဝှေါ်သုံးစွဲခြင်းဖြစ်သောကြောင့် တိုင်းရင်းသားဆိုသောဝေါဟာရနှင့် တိုင်းတာမည်ဆိုပါက
မိုးနှင့်မြေလိုကွာဝေးပါသည်။ မျှာဉ်ပြိုင်လိုဘဲမည့်သည်အခါမျှမဆုံဆည်းနှိုင်သောအရာ ပင်ဖြစ်ပေသည်။
Reply	စာဖတ်သူ November 12, 2012 - 7:28 am	“ဘင်္ဂလီလူမျိုးများသည် …….. အင်္ဂလိပ်စကားကို ၄၀%လောက်သုံစွဲလျှက်ရှိကြပေသည်။”
Man, are you serious ?? This is totally impossible !! People who could use common sense would not accept your assertion.
“သူတို့ပြောသောစကားမှာ စံမမှီသောစကားဖြစ်သည်သမက …”
This phrase points out that –
(1) These people have departed their original place foralong time and residing in Burma foralong time.
(2) You are somply racist.
(1) Could you provide any concrete proof for this ?
(2) If you keep pushing them with current pressure, yes of course they have no other choice but to live seperately from us.
There’s much more things to point out but I chose to spare my time for more beneficial things.
Reply	ranninsoe November 13, 2012 - 1:15 am	ံခင်ဗျားကဒီလောက်တောင်မသိဘူးဆိုရင် ဘာကြောင်သူများကိုဝေဖန်နေရ
တာလည်း သိချင်ရင်ရှာဖွေပြီးဖတ်ပို့ ကျန်တာတွေကိုရှာမရရင် ရှိကောင်းရှိမယ်
ခင်ဗျားဟာ ကနေဒါနိုင်ငံ Simon Fraser တက္ကသိုလ်တွင် ပါရဂူဘွဲ့ယူစာတမ်း ပြုစုနေသူ ဖြစ်သည်။ ဟုရေးထားတာ ဘယ်နည်းနှင့်မှမဖြစ်နှိုင်ဘူး နိုင်ငံသားတောင်မဖြစ်သေးတဲ့ ခိုးဝင်လာတဲ့သူတွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားဟာ ဘာကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ သိမှာပေါ့နော်။
ခင်ဗျားရဲ့အမည်နှင့် Reg နံပါတ်ကိုဘဲပေးပါ ကျွန်တော်တို့စီစစ်ကြည့်ပါမယ်
Reply	ranninsoe November 9, 2012 - 2:35 am	ဘင်္ဂလီလူမျိုးများသည် အင်္ဂလိပ်လက်အောက်တွင် နှစ်ပေါင်များစွာနေခဲ့ရသူများပီပီ သူတို့၏စ ကား စာပေများတွင်လည်း မူရင်းဘာသာစကားများတိမ်ကော ပျောက်ကွယ်လာပြီး နေတဓူဝ သုံးစွဲ လျှက်ရှိသောစကားများတွင် အင်္ဂလိပ်စကားကို ၄၀%လောက်သုံစွဲလျှက်ရှိကြပေသည်။ ဥပမာ ထိုင်ခုံ( Chair), စားပွဲခုံ( table) , ဥက္ကဌ (Chairman) စသည် စသည့်စကားလုံးများအပြင် လူပါတ်ဝန်ကျင်တွင်သွားလားလှုပ်ရှားနေသော လူအဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်း ပင်္လယ်နားတွင်နေ သူများကို (ဘွင့်ဂျာ) ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးသူများကို (ဇိုင်လာ) ၊ မြွေဖမ်းမြွေပြပြီး ဘသရပ်တည်နေသူများကို (ဘိုင်လာ) ဟုခေါ်ကြပြီး တနေတကျေးတွင် ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြသောသူများကို (ရွင့်ဂျာ) ဟုခေါ်ပေသည်။ အမှန်ကရွင်ဂျာဆိုသောစကားလုံးသည် အင်္ဂလိပ်နှင့် ဘင်္ဂလီစကားနှစ်လုံးကိုပေါင်းစည်ထားသော ဝေါဟရဖြစ်ပြီးနှိမ့်ချ၍ခေါ်သော ဝေါဟာရ စကားဖြစ်ပေသည်။( Wrong+gya)( အင်္ဂလိပ်+ဘင်္ဂလီ) (မှားသော+လူ) အမှန်ကပုံမှန် မဟုတ်သောလူအစုအဝေး ဒုက္ခသယ်များ အိုမဲ့အိမ်မဲ့များကိုခေါ်ဝှေါ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရေးသားစာတွင် ကြားခံစကားလုံးဖြစ်သော(g+g) မှာတူနေသောကြောင့် ရေးသားရာတွင်( Wrongya) ဟုရေးသား ခြင်းဖြစ်ပြီး နောက်တခုကတော့ လူတဦးတယောက်က ယင်းနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘဲ မိမိသည်၎င်းနိုင် ငံသားပါဟု တောင်းဆိုလာသောအချိန်တွင် ပြည့်စုံလုံလောက်သော အထောက်အထားတင်ပြနှိုင် ခြင်းမရှိသူများကိုလည်း (Wrongya) ဟုဘင်္ဂလီစကားဖြင့်ခေါ်ဝှေါ်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။
Reply	ranninsoe November 9, 2012 - 5:47 pm	စားရေးတဲ့သူအနေနှင့်ကနေဒါနိုင်ငံမှာသုံးထားတဲ့ Ethnic Community ကိုကိုးကားထားတာ
ကိုသုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့် သူ့အနေနှင့် တိုင်းရင်သားဆိုသောအသုံးအနှုံးကိုနာမလည်သလို ရှိပြီးသားလူမျိူးတခုကို လူမျိုးနှစ်ခုဖြစ်အောင် တီထွင်ဖန်တီးခွင့်ကို လက်မခံသော နိုင်ငံတ ကာဥပဒေကို နားမလည်ဘဲထင်ရာရေးချလိုက်သော စိတ်ခံစားမှု ဆောင်းပါးတခုသာဖြစ် ပါတယ်။
ရှိမှမရှိတာ မရှိကိုအရှိလုပ်တယ်ဆို စီးပွါးရှာတဲ့နေရာမှာသာ ကြားလိုကောင်းပါတယ် လူမျိုး
အတုထောင်ပြီ နိုင်ငံတနိင်ငံ၏အချုပ်အချာကို မောင်ပိုင်စီးဖို့ကြိုးစားတာကမကောင်းပါ။
နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံက Ethnic ဆိုတာ Community တွေမဟုတ်ဘူးနော် Ethnic Nation တွေဖြစ်ကြတယ်။ ကနေတာနိုင်ငံမှာ Ethnic Community တွေဆိုတာကတော့
ှုimmigrants တွေကိုသုံးတာပါ။ နိုင်ငံတိုင်မှာရှိကြပါတယ် Burmese community လိုပေါ့
Bengali community ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကို ဘယ်သူမှ ကန့်ကွက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး
ဆိုတာကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်းသိအောင်ပြောပြလိုက်ပါရစေဗျာ။
Reply	စာဖတ်သူ November 12, 2012 - 7:51 am	“စိတ်ခံစားမှု ဆောင်းပါးတခုသာဖြစ် ပါတယ်။”
Actually, its you who wrote comments based on your emotion with questionable information.
“နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံက Ethnic ဆိုတာ Community တွေမဟုတ်ဘူးနော် Ethnic Nation တွေဖြစ်ကြတယ်။”
What do you mean by “Ethnic Nation တွေ” ?
Do you mean Burma isafederal country ?
Please tidy up your writing and facts then come back again.
Reply	ranninsoe November 13, 2012 - 1:03 am	ခင်ဗျားဘယ်သူလည်းဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိပါဘူး ဒါပေမဲ့ဘင်္ဂလီဖြစ်ဖို့တော့
များပါတယ် ဒို့နိုင်ငံကိုပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဟုခေါ်ပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီး အချိန်မှစပြီးယနေ့ထိ တချိန်ကကိုယ်ထီးကိုယ်နန်းနှင့်နေခဲ့ကြသည့် လူမျိုးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသားနိုင်ငံဖြစ်သောကြောင့် ၄င်း နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ကြသောတိုင်းရင်းသားများမှာလည်း ခင်ဗျားပြော တဲ့ ခိုးဝင်လာတဲ့လူနှစ်ယောက်တပိုင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာအတူတကွနေထိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားများကို ဥပမာပြောရရင်
( Burmese Ethnic Community) ဆိုတာကိုသုံးလို့မရပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံဟာဥရောပနိုင်ငံတွေလို (Nations) တွေနှင့်ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။
ရှမ်းလူမျိုး ၊ မွန်လူမျိုး ၊ ချင်းလူမျိုး ၊ မွန်လူမျိုး ၊ ကရင်နီ(ကယား)၊ ကချင်လူမျိုး ၊ ရခိုင်လူမျိုးဗမာလူမျိုးနှင့်တခြားတိုင်းရင်သားလူမျိုးတွေ ဟာလည်း တချိန်ကကိုယ့်တိုင်ပြည်ကိုယ့်လူမျိုးဆိုပြီး နေခဲ့ကြ သူ တွေဖြစ်ပါတယ်။
Reply	=== November 13, 2012 - 8:31 pm	ခက်ပါပကော၊ အပေါ်က ငါ့မိတ်ဆွေ “စာဖတ်သူ” ဆိုသာကို ဘယ့်နှာ ဘင်္ဂလီလို့ မှန်းသမ်းစွပ်စွဲချင်သတုံး။
တစ်ချိန်က မြန်မာပြည်က လူမျိုးတွေဟာ ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းနဲ့ နေခဲ့ကြတယ်၊ ဥရောပနိုင်ငံတွေလို Nations တွေနဲ့ ဖွဲ့ထားတယ်ဆိုသာတွေကို မင့်လူတွေကို သွားပြောပါလားကွဲ့။ ရခိုင်အပါဝင် ကိုယ့်စာပေတောင် သင်ခွင့်မရကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားဆိုသူတွေက တုတ်ဒါးတွေနဲ့လိုက်ရင် ပြေးဖို့တော့ ပြင်ထားကွနော။
ငတို့တော့ ဝေးဝေးနေတယ်၊ အေးအေးနေတယ်၊ သူများကို မကူညီနိုင်ပေမယ့် သွားမဆွဘူးကွဲ့။ နောက်ပီး မင့်လို ဟိုကသည်က တစ်ဖက်သတ်ခံစားချက် စာတိုစာစတွေလည်း လျှောက်ကူးမထည့်ဘူးဟ။
Reply	ranninsoe November 16, 2012 - 8:32 pm	ခက်တာကကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး လူဆိုတာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံ မှုရှိရပါတယ် ခုတော့ခင်ဗျားက ကိုယ်ဘယ်သူဆိုတာကိုတောင် အသိပေးဖို့ပျက်ကွက်တယ်ဆိုတော့၊ ဒီပြသ နာကရိုးရိုးလေးပါ ချုပ်အောင်လုပ်နေကြလို့ ရှင်းမရဖြစ်ေ နတာပါ နိုင်ငံတိုင်းမှာ protocol ရှိကြသလို protoplasm ဆိုတာလည်းရှိကြတာမို့ စစ်ဆေးရတာလွယ်ကူပါ တယ်။
ranninsoe November 13, 2012 - 2:33 am	ခိုင်လင်း(မေဃ၀တီ) | နိုင်ဝင်ဘာ (12) 2012
ဆိုတော့ ရခိုင်ပြည်အရေးအခင်းဟာ ပညာမဲ့ခြင်း ၊ ဥပဒေကို နားမ လည်ခြင်းကြောင့် မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောချင်တယ်။ ဒါဆိုရင် ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ အမေးရဲ့ အဖြေကို ပြောလိုတယ်။
ရခိုင်ပြည်ရဲ့ တခြားတဘက်မှာရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်များ ရပ်တည်ချက်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယခုဖွဲ့ စည်းထားတဲ့အတိုင်းပြောရရင် ပြည်နယ်(၇)ခုနဲ့ တိုင်း(၇)ခုရှိပါတယ်။ စုစုပေါင်း (၁၄) ခုပေါ့။ အဲဒီ (၁၄)ခုထဲမှာ ရခိုင်ပြည်က လွဲရင် ကျန်တဲ့ ပြည်နယ်(၆)ခုနဲ့ တိုင်း(၇)တိုင်းမှာလည်း အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်တဲ့လူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနှင့်အတူ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာ ဆင်နွှဲခဲ့တယ်။ လွတ်လပ် ရေး ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း မွတ်ဆလင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပြည်နယ်ကိစ္စကို စိုးစဉ်းမျှ မပြောဆိုခဲ့ပါဘူး။
ထို့ အတူ ဦးနေ၀င်းအာဏာသိမ်းကာလနဲ့ မဆလခေတ်တလျောက်လုံးမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် ၁၉၈၈ လူထုအရေး တော်ပုံ ကာလတွေကနေ ဒီနေ့ အချိန်ထိဘဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေ တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာ ရှင်စံနစ် ချုပ်ငြိမ်းရေး ၊ ဒီမိုကရေစီအရေး ၊ လူ့ အခွင့်ရေး ၊ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ် ယုံကြည်ခွင့် ၊ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင် စုတည်ဆောက်ရေးစတဲ့ မူတွေအပေါ်မှာဘဲ ရပ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်။
တနည်းအားဖြင့် ပြောရရင် မြန်မာနိုင်ငံရှိတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနှင့်အတူ တိုင်းပြည် ကောင်းစားရေးကို ရှေ့ရှုခဲ့တယ်။ တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ သစ္စာရှိပြခဲ့တယ်။ ဒါတွေကို ငြင်း၍ မရနိုင်သလို သမိုင်းအဖြစ်နဲ့လည်း ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံကလည်း အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။
ဒီအထောက်အထားတွေဟာ ရခိုင်ပြည်ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ ပြည်နယ် (၆)ခုနဲ့ တိုင်း(၇)ခုထဲက မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ရပ်တည်မှုတွေဖြစ်တယ်။
ရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ ရပ်တည်ချက်
ရခိုင်ပြည်ထဲမှာ ရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်ကတော့ အခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာ ရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေနဲ့ကွားပြားပါ တယ်။ သူတို့ ရဲ့ အိပ်မက်ဟာ မွတ်ဆလင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်မှတဆင့် သီးခြားမွတ်ဆလင်နိုင်ငံ တည်ထောင်ရေးဖြစ်တယ်။ ဒီ အိပ်မက်မျိုးကို အခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာ ရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ မက်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်(လှုပ်ရှားမှုသမိုင်း)ကို မတွေ့ သေးပါဘူး။ ရခိုင်ပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂလီတွေက တော့ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးမရေးခင်ကပင် ဒီအိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းစဉ်ကာလက ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ ရပ်တည်ချက်
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင် အန္ဒိယနိုင်ငံရှိ မွတ်ဆလင်များက သီးခြားမွတ်ဆလင်နိုင်ငံတည် ထောင်ရေးလှုပ်ရှားမှုဟာ ရခိုင်ပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂလီတွေအတွက် ပုံဖော်စရာ အိပ်မက်တခုရရှိခဲ့တယ်လို့ ပြောရမှာ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ အိပ်မက်က အိန္ဒိယနိုင်ငံက ခွဲထွက်ပြီး ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသစ် ထူထောင်ရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ဆက်စပ်ရန်ဖြစ်တယ်။
ဆိုလိုတာက ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသစ်ဖြစ်ပေါ်လာရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ ရသေ့တောင်တို့ ကို ထည့်ပြီး နိုင်ငံသစ်တည်ဆောက်ရေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂလီတွေဟာ ၁၉၄၂ ခုနှစ် ကရာချီမြို့ မှာ ကျင်းပတဲ့ အစ္စလာမ်ညီလာခံမှာ ပါကစ္စတန်နဲ့ ပေါင်းစည်းရေးအဆိုကို တင်သွင်းခဲ့ဖူးတယ်။
ဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိရဲ့လားလို့ မေးရင် ရှိတယ်ဖြေရပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းကတော့ ၁၉၄၈ ခုနှစ်က ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ဦးပုကလေးရေးထားသော ငါတို့ဗိုလ်ချုပ် ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ တတိယတွဲမှာ ပါတဲ အောက်ပါရေးသားချက်က ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားလို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။
“ စစ်အတွင်း ၁၉၄၆ တွင် Jami-a– tul Ulema-e Islam အဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာရာ ၄င်းပါတီက ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ကရာချီသို့သွားကာ ပါကစ္စတန်လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားနေသော မွတ်ဆလင်ခေါင်းဆောင် ဂျင်းနားနှင့်တွေ့ ဆုံပြီး ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ ရသေ့တောင်တို့ကို ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းခွင့်ပြုရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထိုသို့ဆွေးနွေးရာတွင် ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဒေသကို တိုက်ခိုက်ပြီး ပါကစ္စတန်ထဲသို့ သွတ်သွင်းရန် သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ် ရရှိအောင်လုပ်ပေးရန်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အိန္ဒိယသို့ အသွားတွင် မွတ်ဆလင်ခေါင်းဆောင် မစ္စတာဂျင်းနားနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ရာ ဂျင်းနားက ဘူးသီးတောင်နှင့်မောင်တော ဒေသမှ မွတ်ဆလင်များက ပါကစ္စတန်ထဲသို့ ပူးပေါင်းရန် တောင်းဆိုမှုကို မိမိကိုယ်တိုင် မထောက်ခံကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ မွတ်ဆလင်ခေါင်းဆောင် ဂျင်းနားက ရခိုင်ပြည် မောင်တောနှင့်ဘူးသီး တောင်နယ်များကို ဘင်္ဂလားပြည်(ယခုဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ)ထဲသို့ သွတ်သွင်းပေးရန် စစ်တကောင်းမူဆလင်အချို့က တောင်းဆို ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဤသို့ လုံးဝမဖြစ်စေရပါဟုပြောရင်း ဗမာပြည်သာမက မည်သည့်အခြားနယ်ပယ်ကိုမှ သိမ်းယူရန် သို့မဟုတ် တောင်းယူရန် မူဆလင်လိ(ခ်)၌ ရည်ရွယ်ချက်မရှိကြောင်း ၊ ထိုကဲ့သို့ ဘင်္ဂလားပြည်အရှေ့ပိုင်းမှ လက်တဆုပ်မျှလောက်သော မူဆလင်လူမျိုးအချို့၏ တောင်းဆိုချက်ဆိုသည်မှာလည်း ဘာမှ ဂရုစိုက်စရာမလိုကြောင်း စသည်ဖြင့် ရှင်းပြခဲ့သည်။ “
ဒီနေရာမှာ စကားချပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာက ၂၀၁၁ က ကျနော်ရေးသားခဲ့တဲ့ ဦးရာဇတ်မှသည် ကိုမြအေးအထိ သို့သော် တံခါးလာခေါက်ပြီ ဆောင်းပါးမှာ ဂျင်းနားက ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောကို တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့အမှတ်မှားစွာ ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ အမှန်ကရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂလီတွေက တောင်းဆိုခဲ့တာလို့အမှန်ကို ပြင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ဂျင်းနားရဲ့ ငြင်းပယ်မှုကြောင့် ဘင်္ဂလီတွေဟာ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို ရွေးခဲ့ပြီး ၁၉၄၇ ခုနှစ် ကုန်ခါနီးမှာ မူဂျာဟစ်ပါတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်က ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ Jami-a– tul Ulema-e Islam အဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့ကာ ငွေကြေးကို ဒီအဖွဲ့ က နည်းမျိုးစုံနဲ့ရှာပေးပြီး မူဂျာဟစ်ပါတီကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါ တယ်။
အဲဒီအဖွဲ့ကဘဲ ဘော်တွန်မလေထံ စာရေးပြီး သူတို့ဟာ Indo-Burma Frontier မှာ ရှိတဲ့အတွက် ပင်လုံညီလာခံမှာ Frontier ရပိုင်ခွင့်ကို တင်ပြတောင်းဆိုလိုကြောင်း အကြောင်းကြားခဲ့ပေမယ့် ရခိုင်ပြည်ထဲက ဘင်္ဂလီတွေ ပင်လုံဆီမလှမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လို့အခြားပြည်နယ်တွေထဲမှာ နေထိုင်တဲ့ ဦးဖေခင်ကတော့ ပင်လုံကို တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကို ပြနေသလဲဆိုတော့ တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ သစ္စာစောင့်သိမှု နဲ့ တိုင်းပြည်ကို ဖဲ့ထုတ်ရေးရဲ့ ကွာဟမှုဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ကနေ့ ရိုဟင်ဂျာလို့အမည်ခံထားတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရခင် လွတ်လပ်ရေးအကြိုကာလကပင် မက်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်မျိုးနဲ့ အခြားပြည်နယ်ခြောက်ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းခုနှစ်တိုင်းမှာ ရှိနေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဆန္ဒ သဘောထားဟာ ကွာခြားပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်ဘက်မှာ ရှိနေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားဟာ ဒေသ ခံရခိုင်တွေနဲ့ရော ပြည်ထောင်စုကို လိုလားတဲ့ တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံကိုပါ ခြောက်ခြားစေပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်ထဲမှာ ရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်တွေအားလုံးဟာ ဒီလိုဘဲလားလို့မေးရင် မဟုတ်ဘူးလို့ ဖြေရပါလိမ့်မယ်။ ၁၉၃၁ ၀န်းကျင်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများသမဂ္ဂရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းစိန်ဟာ ရခိုင်ပြည်ထဲက မွတ်ဆလင်တယောက်ပါ။
တိုင်းပြည်ဖဲ့ထုတ်ရေးကို မကြိုးပမ်းခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလို မျိုးဆက်တွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ကနေ့အချိန်မှာ အကြမ်းဖက် ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်္ဂလီတွေရဲ့ အကြမ်းဖက်ခြင်း ၊ တိုင်းပြည်ဖဲ့ထုတ်လိုခြင်းတွေကြောင့် အပြစ်မဲ့ ရခိုင်ပြည်ထဲက မွတ်ဆလင်တွေပါ အရောင်တွေစွန်းထင်းခံခဲ့ရသလို အရောင်တွေချယ်သခြင်းကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ ထို့ အတူ မြန်မာနိုင်ငံတနံ တလျားမှာ ရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်ထုကိုပါ ထင်ယောင်ထင်မှား မယုံသင်္ကာစိတ်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းပြည်ဖဲ့ထုတ်လိုတဲ့ အကြမ်းဖက် ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံဘင်္ဂလီတွေကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း မြန်မာပြည်ထဲမှာ ရှိတဲ မွတ်ဆလင်တွေ ပြသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဆက်ပြောရရင် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီက ဖွဲ့ စည်းခဲ့တဲ့ မူဂျာဟစ်အဖွဲ့ ဟာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းပြီး အဲဒီအဖွဲ့ က
(က) ကုလားတန်မြစ် အနောက်ဘက်ကမ်းနှင့် နစ်မြစ်အရှေ့ ဘက်ကမ်းကြားဒေသကို မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ National Home အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရန်
(ခ) ရခိုင်ရှိမွတ်ဆလင်များကို တိုင်းရင်းသားစာရင်းထဲ ထည့်သွင်း ပေးရန် စသည်ဖြင့် တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။
ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကို ခွဲခြမ်းကြည့်ရင် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီကာရော ရပြီးနှစ်မှာပါ တိုင်းပြည်ဖဲ့ ထုတ်ရေး ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းကို တွေ့ရပါတယ်။နောက်တချက်က မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ကာစမှာ ဘင်္ဂလီတွေကို မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသား စာရင်းမှာ ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိဘူးဆိုတာ ထင်ရှားစေသလို ဘင်္ဂလီတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးစွဲခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုတာလည်း ထင်ရှားစေပါတယ်။
၁၉၅၁ ခု ဇွန်လမှာ နယ်ပယ်အသီးသီးက ပါဝင်တဲ့ မွတ်ဆလင်ညီလာခံကို ရခိုင်ပြည် မောင်တောမြို့နယ် အလယ်သံကျော်ရွာမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အလယ်သံကျော်ညီလာခံက ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်ခဲ့ပြီး အစိုးရသို့အိပ်ဖွင့်ပေးစာအဖြစ်တင်ပြခဲ့တယ်။ ညီလာခံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကတော့ —
(က) ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ချင်းတောင် တန်းများ၊ ကချင်ဒေသများနည်းတူ လွတ်လပ်သော မွတ်ဆလင်ပြည်နယ်အဖြစ် အမြန်ဆုံးဖွဲ့စည်းပေးရန်၊
(ခ) စစ်တွေမြို့ကို ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်း မြောက်ပိုင်းမြို့တော်ဟု သတ်မှတ်ကာ မြို့နှင့်ဆိပ်ကမ်းကွပ်ကဲမှုကို ရခိုင်နှင့်မွတ်ဆလင်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းစီ စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်ခွင့်ပြုရန်နှင့် ပထမဆုံးမြို့တော်ဝန်နှင့် တိုင်းမင်းကြီးကို မွတ်ဆလင်လူမျိုးမှ ခန့်ထားရန်၊
(ဂ) လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့စည်းပေးရန် ထိုတပ်ဖွဲ့မှ မွတ်ဆလင်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ရန် ဗဟိုအစိုးရအဖွဲ့တွင်မူ ၀န်ကြီးခန့်ထားရန်၊
(ဃ) တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်တွင် အခြားပြည်နယ်များနှင့် တိုင်းများနည်းတူ ကိုယ်စားလှယ်အညီအမျှ စေလွတ်ခွင့်ရရန်၊
(င) မွတ်ဆလင်ကောင်စီ ထားရှိခွင့်ပြုရန် စတဲ့အချက်များပါဝင်ပါတယ်။
ဒီညီလာခံကို ပါလီမန်အမတ်များဖြစ်တဲ့ စူလတန်မာမွတ်၊ ဦးဖိုးခိုင်(မွတ်ဆလင်)၊ ဒေါ်မြညွန့်(မွတ်ဆလင်)တို့ ပါတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပါလီမန်အမတ်များဟာ ဘာသာရေးလမ်းညွန်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကနေ့ လွှတ်တော်ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ဘင်္ဂလီအမတ်တွေကို သတိကြီးစွာ ထားရမယ်ဆိုတာ ထင်ရှားစေပါတယ်။ တဘက်မှာလည်း လက်နက်ကိုင်နေတဲ့ မူဂျာဟစ်ပါတီကလည်း ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုထံသို့ တင်သွင်းခဲ့သည့်စာတမ်းထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ တောင်းဆိုချက်များအနက် အရေးကြီးသည့် တောင်းဆိုချက်တွေကတော့ —
(က) ရခိုင်ဒေသအတွင်းရှိ မွတ်ဆလင်များအားလုံးကို နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ရခိုင်မွတ်ဆလင်များအဖြစ် လက်ခံရန်၊
(ခ) မူဂျာဟစ်များကို အမြဲတမ်း တပ်မတော်တွင် ရခိုင်မွတ်ဆလင်သေနတ်ကိုင်တပ်အဖြစ် သီးခြားထားပေးရန် စတဲ့ အချက်များပါဝင်ပါတယ်။
အထက်က တင်ပြခဲ့တဲ့ တောင်းဆိုချက်နှစ်ရပ်စလုံးမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးစွဲခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာလည်း ရိုဟင်ဂျာပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပေမယ့် ဒီစကားလုံးကို သုံးစွဲရင် မှတ်ပုံတင်ခွင့် မပြုခဲ့တဲ့အတွက် အခြားနာမည်ကို ရွေးခဲ့ရတဲ့ သာဓကတွေရှိတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အဲဒီစကားလုံးကို ပယ်ထားခဲ့ပေမယ့် ဘင်္ဂလီတွေဟာ နိုင်ငံတကာကို ခြေဆန့်ပြီး ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့စကားလုံးကို နိုင်ငံတကာက သိအောင် ငွေတွေခင်းပြီး ပြုလုပ်လာခဲ့တယ်။
တဘက်မှာလည်း မီဒီယာအချို့ကို အသုံးချခဲ့ တယ်။ နောက်ဆုံး ပြဿာနာတွေ ဖန်တီးပြီး ဘာသာရေးအရ ဖိနှိပ်ခံနေရပါတယ်။ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ် နေပါတယ်လို့အော်ဟစ်ခဲ့တယ်။ OIC လို အဖွဲ့ကိုတောင် မြန်မာပြည်ထဲ ၀င်အောင်နိုင်အောင်ထိ ထိုးဖောက်လှုပ်ရှားနိုင်တယ်။ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်သလို ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဟန်ချက်ညီညီလှုပ်ရှားမှုဟာ လွှတ်တော်ထဲထိရောက်အောင် လှုပ်ရှားပြခဲ့တယ်။ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းကာလတွေက မြန်မာနိုင်ငံ တနံတလျားမှာ ရှိနေတဲ့ မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေကို မစည်းရုံးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ကနေ့ အချိန်မှာ တသားထဲဖြစ်အောင် စည်းရုံးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောမယ်ဆို ပြောနိုင်တယ်။
အထက်က တင်ပြခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်ထဲက ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်္ဂလီတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့်ဟာ လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကပင် ဒီနေ့အချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းရင်းသားဖြစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ မွတ်ဆလင်ပြည်နယ်မှသည် မွတ်ဆလင်နိုင်ငံထူထောင်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကို အာဏာမဲ့နေတဲ့ ရခိုင်လူထုက ခေတ်အဆက်ဆက် ထိတွေ့ခံစားလာရခြင်းဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် ရခိုင်လူထုရဲ့ တုန့်ပြန်မှုဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာအပေါ်မှာ ရပ်ပြီးတုန့်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ပညာမတတ်မှု ၊ ဥပဒေကို နားမလည်မှု ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြေဟာ ခိုင်မာတဲ့အထောက် အထားမရှိတဲ့ ယိုင်နဲနဲ အထောက်အထားတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အထက်က အထောက်အထားတွေနဲ့ ချပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် အလယ်သံကျော်ညီလာခံရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ ဒီနေ့အချိန်ထိ သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပြီး ဟန်ချက်ညီညီလှုပ်ရှားနေဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြောလိုပါ တယ်။ပါလီမန် ခေတ်ကလည်း လွှတ်တော်ထဲထိ တင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ဖူးသလို ကနေ့အချိန်မှာလည်း လွှတ်တော်ထဲထိ သယ်ဆောင်လာကာ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂလီတွေက နိုင်ငံတော်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပြင်းထန်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတရပ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။ ။
Reply	Nakano Min(Okinawa base) November 14, 2012 - 9:24 am	Big thank brother.We all must know it and share it.Thank you .
Reply	Aung Myo chan Thar November 12, 2012 - 5:20 pm	စာရေးသူ ရေးတာကို သဘောကျပေမဲ့ နည်းနည်း comment ပေးချင်ပါတယ်
ကျနော်တို့ အခုဖြစ်နေတာကအရင်စစ်အစိုးရရဲ့ ဆိုးမွေတွေကိုခံစားနေရတာပါဘဲ။
ဒီလိုပြောင်းရွေ့နေထိုင်လို့သာ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးရရင် အာလုံး Europe ကိုသွားကြရအောင်။
“စာရေးသူသည် ကနေဒါနိုင်ငံ Simon Fraser တက္ကသိုလ်တွင် ပါရဂူဘွဲ့ယူစာတမ်း ပြုစုနေသူ ဖြစ်သည်။” ဒီစာကြောင်းလေက ရေးထားသမျှကို ဖျက်ဆီးလိုက်သလိုပါဘဲ။
ကျနော်တို့ကလဲ ရခိုင်မှ ကိုယ့်အမျိုးထင်တယ်။
Reply	U kyi win November 12, 2012 - 7:09 pm	ဘင်္ဂလီအမျိုးအနွယ်ဆိုတာမြင်ရုံနဲ့ သိနိုင်သားဘဲရိုဟင်ဂျာဇွတ်လုပ်မနေပါနဲ့ ဘင်္ဂလီဆိုတဲ့ကိုယ်မျိုးရိုးဖျောက်ချင်တာသူတို့ ဘိုးဘွားတွေကိုသစ္စာမဲ့ရာမကျဖူးလားဥပဒေနဲ့ ညီညွတ်ရင်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိတာမှန်တယ်ကိုယ့်မျိုးရိုးကိုတောင်လိမ်ညာဖုံးကွယ်တတ်တာ ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုဘယ်လိုယုံရမလဲ နိုင်ငံအပေါ်သစ္စာရှိနိုင်ပါ့မလား သူတို့ ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဘာသာအယူဝါဒနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာအယူဝါဒအဆင်ပြေပါ့မလားတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဘာသာရေးအရလွှမ်မိုးဖို့ ကြိုးစားနေတာစစ်တိုက်လူသတ်ပြီးဘာသာရေးနယ်ချဲ့ ခဲ့တာသမိုင်းအထောက်အထားရှိပြီးသား ဒီတော့စဉ်းစားကြည့်အတူယှဉ်တွဲနေဖို့ အန္တရာယ်မရှိဖူးလို့ အာမခံသလားတိုင်းပြည်၊လူမျိုးဘာသာယဉ်ကျေးမှုပျက်မဲ့ဒီလိုရေးသားမှုကိုကန့် ကွက်ပါတယ်
Reply	Aung Naine November 18, 2012 - 12:03 am	ကိုစိုင်းလတ်က ‘ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ပြသနာရဲ့အရင်းအမြစ်ဟာ အက်သနစ် (Ethnic) ကို တိုင်းရင်းသားလို့ ဘာ သာပြန်ဆို (သို့မဟုတ်) နားလည်သဘောပေါက်တာက စတယ်လို့ မြင်ပါတယ်’ဆိုပြီး ရေးလိုက်တယ်။ ဒါကို ဖတ်ရတော့ အင်း၊ ကိုစိုင်းလတ်တယောက် အဖြစ်မှန်ကို ဘာမှမသိပါလားလို့ ကောက်ချက်ချလိုက်ရတယ်။ ပြီးတော့ ‘ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့နာမည် ရှိလို့ ရပါ့မလားဆိုရင် ရှိနိုင် ရနိုင်ပါတယ်။ တခြား လူမျိုးနာမည်လည်း တီထွင် ပြောင်းလဲခဲ့ကြတာပါပဲ’လို့ ဆိုလိုက်ပြန်ပါတယ်။ လူမျိုးတိုင်းမှာ မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သလို နာမည်ပြောင်းပိုင် ခွင့် ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှ အငြင်းမပွားလိုပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ပြောနေရတာက ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ နာ မည်ကိုယူပြီးတော့ သူတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားဖြစ်ကြောင်း လိမ်လည်ပြောဆိုနေတာနဲ့ တိုင်း ရင်းသားအခွင့်အရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုနေတာတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ရိုဟင်ဂျာဟာ ဌာနေတိုင်းရင်းသားဖြစ်လို့ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုကြတာ၊
(၂) ၁၇၈၄ခုနှစ်ထိ ရခိုင်ပြည်ဟာ မူဆလင်တိုင်းပြည်တခုဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ ရခိုင်ရှင်ဘုရင်တွေကိုလဲ မူဆလင်ဘု ရင်တွေဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုရေးသားဝါဒဖြန့်ကြတာ၊
(၃) မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီကတည်းက ဘူးသီးတောင်နဲ့မောင်တောနယ်ကို ပါကိစ္စတန်နဲ့ ပူးပေါင်းဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာ၊
(၄) ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနဲ့ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွေကို ရခိုင်တိုင်းမှ ခွဲထုတ်ပြီး သူတို့အတွက် သီးခြား နယ်မြေဖန်တီးပေးဖို့ လှုပ်ရှားတောင်းဆိုခဲ့ကြတာတွေကသာ ‘ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ပြသနာရဲ့အရင်းအမြစ်’တွေ ဆိုတာကိုပါဘဲ။
Reply	Joe Nay Joe November 18, 2012 - 10:18 pm	British were invader , their motto was divide and rule … Why should we Rohingya need to rely on British documents by abandoning the brilliant history of our forefathers who were the king maker of Arakan? Did British recod Rakhine as Rakhine? Why you hesitate to be called as Mahg as did British called you?
Arakan history is not start from British Occupation, she hasaglorious history of past where Rohingya playedagreat and praise worthy rule…
For your information, Readabook written before Bristish invasion, then you will be enlighten and aware of the existence of Rohingya and their language in Arakan long before Britsh Invasion .
The Mahommedans settled at Arakan ,call the country Rovingaw I shall now add three dialects, spoken in the Burma Empire, but evidently derived from thelanguage of the Hindu nation. The first is that spoken by the Mohammedans , who have long settled in Arakan , and who call themselves Rooinga , or natives of Arakan “
Reply	Aung Naine November 18, 2012 - 11:36 pm	စိုင်းလတ်က ‘ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ပြသနာရဲ့အရင်းအမြစ်ဟာ အက်သနစ် (Ethnic) ကို တိုင်းရင်းသားလို့ ဘာသာ ပြန်ဆို (သို့မဟုတ်) နားလည်သဘောပေါက်တာက စတယ်လို့ မြင်ပါတယ်’လို့ ရေးထားတာ တွေ့ရတယ်။ ဒီ သုံးသပ်ဝေဖန်ချက်ကို ကြည့်ပြီးတော့ စိုင်းလတ်တယောက် အမှန်တရားကို တကယ်မသိပါလားလို့ နားလည် လိုက်တယ်။
၁။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟာ ရခိုင်ပြည်ထဲမှာ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်နေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတမျိုးဖြစ် ကြောင်း သမိုင်းလိမ်တွေဖန်တီးပြီး ၀ါဒဖြန့်မှုနဲ့အတူ သူတို့ကို တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးပေးဖို့ မတော်မလျော် တောင်းဆိုနေကြတာ၊
၂။ ၁၇၈၄ခုနှစ် မြန်မာဘုရင်က သိမ်းပိုက်သည်ထိ ရခိုင်ပြည်ဟာ မူဆလင်ဘုရင်အဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ မူဆလင်တိုင်းပြည်တခုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုဝါဒဖြန့်ကြတာ၊
၃။ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီကတည်းက ဘူးသီးတောင်နဲ့မောင်တောမြို့နယ်နှစ်ခုကို ပါကိစ္စတန်နဲ့ပူး ပေါင်းရေးအတွက် လှုပ်ရှားခဲ့ကြပြီး ‘ပါကိစ္စတန် ဂျိန်ဒါဘာဒ်’လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ကြတာ၊
၄။ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနဲ့ရသေ့ တောင်မြို့နယ်တွေကို ရခိုင်တိုင်းမှခွဲထုတ်ပြီး သူတို့အတွက် သီးခြားနယ်မြေဖန်တီးပေးဖို့ တောင်းဆိုလှုပ်ရှားခဲ့ ကြတာတွေကသာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ပြဿနာရဲ့အရင်းအမြစ်တွေဖြစ်တယ်စိုင်းလတ်။
နောက်ပြီးတော့ ‘ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ နာမည် ရှိလို့ ရပါ့မလားဆိုရင် ရှိနိုင် ရနိုင်ပါတယ်။ တခြား လူမျိုးနာမည်လည်း တီထွင်ပြောင်းလဲခဲ့ကြတာပါပဲ’လို့ စိုင်းလတ်က ရေးထားပြန်သေးတယ်။ လူမျိုးတမျိုးဟာ မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက် ရာနာမည်ကို ပြောင်းလဲမှည့်ခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အငြင်းမပွားလိုပါဘူး။ အခု ကျွန်တော်တို့ပြောနေရတာက သူတို့ဟာ ဘင်္ဂလီတွေပါဆိုတာ ကျွန်တော်တို့သိထားရဲ့သားနဲ့ သူတို့က ရိုဟင်ဂျာပါလို့ ဗြောင် လိမ်နေကြလို့ဘဲ။ နောက်တချက်က ဒီနာမည်ကို အသုံးချပြီးတော့ သူတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသားလူ မျိုးတမျိုးဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့် သူတို့ကို တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးပေးရမယ်လို့ တောင်းဆိုနေကြလို့ဘဲဖြစ် တယ်။
စကားမစပ်။ နအဖစစ်အစိုးရအုပ်စိုးတုန်းက မန္တလေးမြို့ထဲသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့တဲ့တရုပ်တွေနဲ့ တချိန်တည်းမှာ ရှမ်း ပြည်နယ်ထဲသို့ အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်ရောက်ခဲ့တဲ့ တရုပ်နဲ့ဝလူမျိုးတွေက နောက်နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ ‘တို့ဟာ ကူဘလိုင်ခန်ဘုရင် မြန်မာနိုင်ငံထဲ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ကတည်းက နေထိုင်လာခဲ့ကြသူတွေပါ’လို့ ပြောဆိုဝါ ဒဖြန့်ပြီး တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတောင်းဆိုလာကြရင် သူတို့အပေါ် စိုင်းလတ်ရဲ့သဘောထားက ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်။
Reply	Thandar Oo November 19, 2012 - 10:42 am	We Should confirm scientifically. Myanmar have only 135 races not 136. Rohingha’s want is 136 races in Myanmar. We can confirm with DNA checking system, that is Rohinghas are Myanmar races or Binghali.
Reply	swe htwe November 20, 2012 - 12:46 am	I am strongly agreed to you. We should do it.
Reply	Joe Nay Joe November 20, 2012 - 11:58 pm	Not only Rohingya, but also Rakhine’s DNA need to be checked! if Rakhine is Bamar, Rakhine should be kicked out of Arakan state. Rakhine never told they have bamar gene but Rohingya never denied that they do not have bangali bood. Rohingya always says that they areamix blood of Arab,Persian and Bangali.
Reply	Jim December 3, 2012 - 10:19 pm	ခင်ဗျားတို့ဘင်္ဂလီတွေက အာရပ်တွေ ပထန်းတွေနှင့်သွေးရောထားရင်
The Bengali people are an ethnic community native to the historic region of Bengal (now divided between Bangladesh and India) in South Asia. They speak Bengali (বাংলা Bangla), which is an Indo-Aryan language of the eastern Indian subcontinent, evolved from the Magadhi Prakrit and Sanskrit languages. In their native language, they are referred to as বাঙালী (pronounced Bangali). They primarily belong to Indo-Aryan and Mongolo-Dravidian stock, and are closely related to Austro-Asiatic, Dravidian, Assamese, Sinhalese, Munda, and Tibeto-Burman linguistic/ethnic stocks. As such, Bengalis areahomogeneous but considerably diverse ethnic group with heterogeneous origins
Remnants of civilisation in the greater Bengal region date back 4,000 years, when the region was settled by Dravidian, Tibeto-Burman and Austro-Asiatic peoples. The origin of the word Bangla ~ Bengal is unknown, though it is believed to be derived from the Dravidian-speaking tribe Bang that settled in the area around the year 1000 BCE.
After the arrival of Indo-Aryans, the kingdoms of Anga, Vanga and Magadha were formed in and around Bengal and were first described in the Atharvaveda around 1000 BCE. From the 6th century BCE, Magadha expanded to include most of the Bihar and Bengal regions. It was one of the four main kingdoms of India at the time of Buddha and was one of the sixteen Mahajanapadas. Under the Maurya Empire founded by Chandragupta Maurya, Magadha extended over nearly all of South Asia, including parts of Persia and Afghanistan, reaching its greatest extent under the Buddhist emperor Ashoka the Great in the 3rd century BCE. One of the earliest foreign references to Bengal is the mention ofaland ruled by the king Xandrammes named Gangaridai by the Greeks around 100 BCE. The word is speculated to have come from Gangahrd (Land with the Ganges in its heart) in reference to an area in Bengal. Later from the 3rd to the 6th centuries CE, the kingdom of Magadha served as the seat of the Gupta Empire
One of the first recorded independent king of Bengal was Shashanka, reigning around the early 7th century. Afteraperiod of anarchy, Gopala came to power in 750 by democratic election. He founded the Bengali Buddhist Pala Empire which ruled the region for four hundred years, and expanded across much of Southern Asia, from Assam in the northeast, to Kabul in the west, to Andhra Pradesh in the south. Atisha wasarenowned Bengali Buddhist teacher who was instrumental in revival of Buddhism in Tibet and also held the position of Abbot at the Vikramshila university. Tilopa was also from Bengal region.
The Pala dynasty was later followed byashorter reign of the Hindu Sena Empire. Islam was introduced to Bengal in the twelfth century by Sufi missionaries. Subsequent Muslim conquests helped spread Islam throughout the region. Bakhtiar Khilji, an Afghan general of the Slave dynasty of Delhi Sultanate, defeated Lakshman Sen of the Sena dynasty and conquered large parts of Bengal. Consequently, the region was ruled by dynasties of sultans and feudal lords under the Delhi Sultanate for the next few hundred years. Islam was introduced to the Sylhet region by the Muslim saint Shah Jalal in the early 14th century. In the early 17th century, Mughal general Islam Khan[disambiguation needed] conquered Bengal. However, administration by governors appointed by the court of the Mughal Empire gave way to semi-independence of the area under the Nawabs of Murshidabad, who nominally respected the sovereignty of the Mughals in Delhi. After the weakening of the Mughal Empire with the death of Emperor Aurangzeb in 1707, Bengal was ruled independently by the Nawabs until 1757, when the region was annexed by the East India Company after the Battle of Plassey.
ခင်ဗျားတို့ မသိတာတွေကို လေ့လာဖို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။
Reply	Ma Ma November 20, 2012 - 9:46 pm	မောင်လေးက ရိုဟင်ဂျာကို အက်သနစ်နေရာမှာ ထားပြီး ကချင်၊ ကယား၊ ရှမ်း စသဖြင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေနဲ့ တန်းတူထားချင်ပုံရတယ်နော်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားထဲမှာတော့ ရိုဟင်ဂျာ မပါတာတော့သေချာပါတယ်။ ဒီတော့ ရိုဟင်ဂျာဟာ ရခိုင်ရဲ့ မျိုးနွယ်စုဝင် လူမျိုးစု တခုလား ဆိုရင်လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး- ဒီတော့ကာ—-
Reply	san dar November 23, 2012 - 1:11 pm	DNA sit kyi lite har.. bal thu naetamyo po taw kya tha lae thi ya tar pop… hee hee..
Reply	san dar November 23, 2012 - 1:16 pm	right ko taun nay yon tin ma ka bae responsibility par ta khar htae thitsar shi shi twe par lar u lar kya mal so yin problem ma shi laut par buu loet htin par tal.. ae lo responsibility par u poet thit sar shi tal so tar kyan taet ta pyay lone ka doubt kinn thwarr ag myan myan lote nai kya mal so yin de conflict myan myan aye thwarr mal loet htin tar par pae…
Reply	ဒူဝါ November 25, 2012 - 12:51 am	အခုမှ ၀င်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီနယ်ကျော်သမားကိစ္စတော့ ဟုတ်ပါပြီ၊ ဥပဒေ နဲ့ မညီလို့ ဖမ်း၊ ထောင်ချ၊ ပြန်ပို့မယ် ဆိုပါတော့.. နှစ်ကိုယ်ကတည်းက ရှိပြီးသား ဘင်္ဂါလီ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်ဖြစ်၊ တရုတ် ဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံခြားသား တွေကို ဥပဒေ အရ ဘယ်လို ဆက်ပြီး သတ်မှတ်မလဲ ဆိုတဲ့ အချက်အပေါ် ဆွေးနွေးရင် ပိုအဆင်ပြေမှာပါ။ ခိုးဝင်လာတဲ့ ပြဿနာက ဘင်္ဂါလီပဲ မဟုတ်၊ တရုတ်တွေလဲ အများကြီးပါ။
Reply	=== November 26, 2012 - 8:18 am	အ ဟစ် ဟစ် ငါ့ကို စာရေးသူလို့ အထင်ကြီးသူတွေလည်း ရှိသေးတယ်ပါလား။
ငါ့မတော့ ပါရဂူဘွဲ့ ယူဖို့နေနေသာသာ ဘွဲ့တောင် ဘယ်တော့မှရမယ်မှန်း မသိသေးဘူး။
ဒီကြားထဲ ခံစားချက်အပေါ် အရင်းခံရေးသူ၊ လိုရာကို ဆွဲရေးသူတွေကလည်း များပါ့ဗျာ။
ဒီလူတွေနဲ့တော့ မြန်မာပြည်ကြီး ရင်လေးစရာ။
Wishful Thinking တွေဟာ တစ်ကယ် မဖြစ်လာနိုင်၊
အများစုက လက်မခံတာကြောင့်လည်း အမှန်ဟာ အမှားဖြစ်မသွားဘူးဆိုတဲ့ သဘောသဘာဝကို သိမှတ်နိုင်ကြရင်တော့ သမာသမတ်ကျတဲ့ မျှတတဲ့အမြင်ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ရာ နည်းနည်းနီးစပ်လာပြီလို့ ပြောနိုင်တယ်။
Reply	American rakhine November 26, 2012 - 1:57 pm	Remember that Cannada and United States are very different than Burma in immigration. There are country of immigrants. Don’t mass up the situation.